ShweMinThar: March 2007
4.The Brown Dress Shoe
In today’s fashion world, brown is the new black. While black is stillaclassic color and reserved for ultra-formal occasions, brown has become an acceptable alternative for occasions that are less decorous, yet still proper -- like the boardroom, for example. The Hermesilas model of dress shoe from Aldo is the perfect pair to slip your feet into and head to work.
5.The Ankle Boot
The ankle boot is an important shoe to add to your collection -- especially for the fall. It’safunctional piece because you can wear it in varied ways. For instance, you can wear your ankle boot withabusiness suit orapair of jeans and it will complement both looks successfully. This black leather, square-toe boots from Gordon Rush areaprime example ofasophisticated shoe that you can pair with almost any pair of pants.
If you feelalittle lost when it comes to buildingafunctional wardrobe, adding these five shoes to your clothing collection will beavery good start for you. Have these types of shoes handy in your closet and you’ll be readily prepared to complete an outfit for any occasion that should arise.
Posted by Alex Aung at 5:35 PM2comments:
Posted by Alex Aung at 5:20 PM No comments:
ကုမုဒြာ။ ။ တကယ်လို့ H5N1ဗိုင်းရပ်စ်လူကို ကူးစက်ရင် ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲဆိုတာ ပြောပေးပါဦး။
ကြည်။ ။ စစချင်းလူမှဖြစ်တဲ့ တုပ်ကွေးလို ဖျားမယ်။၃၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်ပြီး ဖျားမယ်၊ချောင်းဆိုးမယ်၊ လည်ချောင်းနာမယ်၊ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲမယ်(Muscle Pain)၊အသက်ရှူကျပ်တယ်၊မောတယ်။ ဒါကိုမသင်္ကာဖွယ် ရာ သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာအခြေအနေ[possible or suspected case of influenza type A(H5N1)]လို့ခေါ် တယ်။ဆရာဝန်ပြတော့ H5N1ဖြစ်တဲ့ကြက်ငှက်သို့မဟုတ် လူနာနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်(close contact history)ရှိခဲ့ လားပြန်စစ်ကြည့်ရမှာပေါ့။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ၄၈နာရီအတွင်း ဆေးပေးရင် ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ခုထိတော့ လူကိုကူးတောမတွေ့သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သတိထားဖို့တော့လိုပြီ။ အထိတ်တလန့် ကြောက်လန့်တကြား သတိထားဖို့ မဆိုလိုဘူး။လိုအပ်တဲ့ လိုက်နာမှုနဲ့ သတိချပ်မှု(awareness)ကိုဆိုလိုချင်တာပါ။
ကုမုဒြာ။ ။ လူအများက ဘယ်လိုသတိချပ်မှုတွေနဲ့ ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ လိုပါသလဲချင်ဗျာ။
ကြည်။ ။ကြက်ငှက်တွေ သေတာဘာကြောင့်မှန်းမသိရင် သွားမကိုင်နဲ့၊သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကို အကြောင်းကြားပါ။ ငှက်မှန်သမျှသေတာ တွေ့တယ်ဆိုရင်ဂရုပြုပါ။ကြက်မွေးမြူရေးခြံတွေမှာ လေကောင်းလေသန့်ရအောင် သန့်ရှင်းရေးတွေ လုပ်ပေးရမယ်။ကြက်ချေးတွေကို နှာခေါင်းစည်းနဲ့ လက်အိတ် တွေဝတ်ပြီး သေချာရှင်းရမယ်။ကြက်တွေကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ သယ်မယ်ဆိုရင် ဇီဝလုံခြုံမှုအတွက် သေချာစိစစ်ရမယ်။ လူဝင်လူထွက် ဂရုပြုမယ်။ထရပ်ကားနဲ့ သယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင် ဂိတ်ဝနားမှာ ရေကန်သေး သေးလေးလုပ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းထား၊ကားက အဲသည့်ထဲကဖြတ်သွားရမယ်။ဒါက ခြံထဲမှာမဖြစ်သေးဘူး။အနီး တစ်ဝိုက်မှာဖြစ်နေပြီ ဆိုတာနဲပ လုပ်ရမှာ။ခြံလုပ်သားတွေ အိမ်မပြန်ခင် ဖိနပ်တွေ၊အ၀တ်အစားတွေ အကုန်လဲရ မယ်။ မျက်နှာဖုံးစွပ်သင့်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ တစ်ခါသုံးmaskလေးတွေတပ်သင့်တယ်။ အရေးကြီးတာက လက်သေချာဆေးဖို့ပါပဲ။
ကြက်ခြံထဲမှာ ကြက်သုံးလေးကောင် H5N1တွေ့ပြီဆိုရင် ကျန်တဲ့ကြက်တွေ အကုန်သတ်ပစ်ရတယ်။ရောဂါမပြန့် ပွားသေးသော်လည်း ထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ (cut the transmission)အကုန်သတ်ပစ်ရတာ။ Culling သို့မဟုတ် stamping out လို့ခေါ်တယ်။အဲသည့်နေရာနဲ့ တစ်ကီလိုမီတာ အကွာအတွင်းက ကြက်တွေလည်း အကုန်သတ်။ သူတို့မှာ မရှိသေးပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိနေပြီ။ကြက်သေတာကိုမပြောဘဲ တိတ်တိတ်လေးနေလို့ H5N1ဖြစ်ခဲ့သော် အကုန်ပျံ့နှံကုန်မှာပဲ။ တာဝန်သိဖို့လိုတယ်။ ကူးစက်ရောဂါဆိုတာဖုံးဖိထားလေ ပိုဆိုးလေပဲ။ဖိထားရင် ပိုကြီးကြီး လာပြီး မနိုင်ဘူးဖြစ်သွားရော။
ကုမုဒြာ။ ။H5N1 ကငှက်မဟုတ်ဘဲ အခြားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကို ကူးနိုင်ပါသလား။
ကြည်။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ H5N1ကူးစက်ခံရလို့ ကြောင်သေတာနဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာ ကျားတွေကို ကြက်အစိမ်းကျွေး တော့ ကျားတွေသေတာရှိခဲ့တယ်။၀က်တွေကိုလည်းကူးနိုင်တယ်။ ခွေးကိုကူးတာတော့မတွေ့ရသေးဘူး။
ကုမုဒြာ။ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားတွေကို သိပါရစေ။
ကြည်။ ။ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်(influenza virus)ဆိုတာကူးစက်ရောဂါပိုးတွေထဲကမျိုးဗီဇ(RNA)ရှစ်စိတ်ရှိတဲ့ ပြောင်းလဲလွယ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်။ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်က Type A,B,C သုံးမျိုးရှိတဲ့အထဲကကြက်ငှက်မှာ ဖြစ်တာType A။ Type Aထဲမှာ Subtype အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Hအမျိုးအစား ၁၆ခုနဲ့ N ကကိုးခုရှိတယ်။ ၁၆ခုသော Hနဲ့ ကိုးခုသောNတို့ပေါင်းစပ်ပြီး အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။H1N1, H2N1, H5N1 စသဖြင့်ပေါ့။ အဲသည့် Type Aထဲ မှာမှ လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာ H5N1 ဗိုင်းရပ်စ်။
ကုမုဒြာ။ ။ H5N1ဗိုင်းရပ်စ်က တခြား တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က ဘာတွေဖြစ်မလဲခင်ဗျာ။
ကြည်။ ။ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေထဲမှာH5N1က အပြင်းဆုံးပဲ။ ကျန်တဲ့ တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ H5N1ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအနှံ့မှာဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း၊ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း၊ဦးနှောက်၊အသည်း၊နှလုံး၊ကြွက်သားအကုန်လုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့ ကအစာလမ်းကြောင်းထဲရောက်လို့ ၀မ်းလျှော်တာရှိတယ်။ ဦးနှောက်ထဲရောက်ပြီး ဦးနှောက်ရောင်တာ (encephalitis)၊ သတိလစ်မေ့မြောတာ(coma)လည်းရှားရှားပါးပါး case reportရှိဖူးတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က တုံ့ပြန်တဲ့ ခုခံအားအရမ်းများပြီး ထိခိုက်တာလည်းရှိတယ်။ Over reaction by the immune system ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တစ်မျိုး၊ တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲလို့ တစ်မျိုး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံရနိုင်တယ်။H5N1က အချိန်မရွေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ငှက်ရိုင်းပျံတဲ့ ရာသီဆိုရင် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အမြဲမပြတ် သတိချပ်နေရမယ်။
ဇေယျာလှိုင်( အမှတ် ၂၆၃၊ ၁၆မတ်လ ၂၀၀၇ သောကြာနေ့ထုတ် ကုမုဒြာဂျာနယ်မှ ရယူပါသည်)
Posted by Alex Aung at 4:47 PM No comments:
ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)အဏုဇီဝဗေဒဌာန၊ ပါမောက္ခဌာနမှုး၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာ ကြည်ကြည်သင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ဖေဖော်ဝါရီ၂၈ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက မြို့နယ်အချို့မှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့သံသယဖြစ်ဖွယ် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါကို မတ်၁၀ရက်က H5N1ဗိုင်းရပ်စ် (confirmed H5N1 Avian Influenza)အဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ခုနှစ် မတ်လ၈ရက်က H5N1ဗိုင်းရပ်စ်ကို စစ်ကိုင်းနဲ့ မန္တလေးမှာ ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယခုဒုတိယအကြိမ် ကရန်ကုန်မှာတွေ့ရှိတာပါ။ WHOစာရင်းအရ ၂၀၀၇မတ်လ ၉ရက်နေ့အထိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ၂၇၇ယောက် H5N1 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီး ၁၆၇ယောက်သေဆုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြက်ငှက်တင်မက ဘဲ လူကိုပါကူးစက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ H5N1နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)အဏုဇီဝဗေဒဌာန၊ ပါမောက္ခနှင့် ဌာနမှူး၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာကြည်ကြည်သင်းကို မတ်၉ရက်နေ့က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အချို့ကို ကောက် နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကုမုဒြာ။ ။ H5N1ဗိုင်းရပ်စ်က လူကိုကူးစက်နိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။
ဒေါက်တာကြည်ကြည်သင်း။ ။ အရင်တုန်းက ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးက ငှက်တွေမှာပဲဖြစ်တာ။H5N1က ၁၉၉၇တုန်းက ဟောင်ကောင်မှာ အသားစားကြက်မှာဖြစ်ပြီး လူကိုကူးတယ်။Avian influenzaကြက်ငှက်တုပ် ကွေး အမျိုးမျိုးထဲမှာ လူကို ကူးတဲ့ ပထမဆုံးသက်သေ သာဓကပဲ။ အဲသည်တုန်းက လူ၁၈ယောက်ကို ကူးတယ်။ ခြောက်ယောက် သေတယ်။ ငှက်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်တွေက သာမန်အားဖြင့် လူကိုကူးစက်လေ့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ ခုတော့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲပြီး လူတွေကိုပါ ရောဂါပေးနိုင်လာပြီ။influenza virus(တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်)တွေက တခြားvirusတွေနဲ့မတူဘူး။မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု(mutation)သိပ်များတယ်။
ကုမုဒြာ။ ။ H5N1ဗိုင်းရပ်စ်က ကြက်ငှက်တွေရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာတွေ့ရတတ်ပြီး ဘယ်လို ကူးစက် တတ်ပါသလဲခင်ဗျာ။
ကြည်။ ။ကြက်ငှက်တွေရဲ့ အစာအူလမ်းကြောင်း၊အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊နှာရည်တွေ၊တံတွေးတွေ၊မစင်တွေ၊ ကြက်တွေကထွက်သမျှအရည်တွေနဲ့သွေးထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကရှိတယ်။စစချင်းကတော့ ငှက်ရိုင်း(wild bird)တွေ အထူးသဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့ငှက်တွေ(migratory water bird)ဆီက ကူးတာပဲ။H5N1ရှိတဲ့ ငှက်ရိုင်းတွေ ကအပေါ်ကဖြတ်ပျံရင်း ရေကန်ထဲမှာ ရေဆင်းသောက်မယ်။မစင်စွန့်မယ်။ အဲသည်ကန်ထဲမှာ အိမ်မွေးငှက် (domestic bird)တွေက အတူရှိနေမယ်ဆိုရင် ရေသောက်ရင်းကူးနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဘဲတွေ၊ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ရောဂါပိုးဝင်ပေမဲ့ လက္ခဏာမပြဘူး။ ဘဲတွေကို silent reservoir(တိတ်တဆိတ် သိုလှောင်ထား သူ)လို့ခေါ်တယ်။(Trojan horse ဟုလည်းခေါ်သည်။) သူတို့ကတစ်ဆင့် တခြားကြက်ငှက်တွေကို ကူးတယ်။ အဓိက မစင်ကကူးတာပဲ။ ကြက်တွေရဲ့ အမွေးအတောင်တွေမှာ မစင်တွေကပ်နေနိုင်တာပဲ။သည်မှာဆို စက်ဘီး လက်ကိုင်မှာ ဇောက်ထိုးချိတ်ပြီးသယ်သွားရင် အတောင်တွေလှုပ်ခတ်မယ်။ အဲသည်ကြက်မွေးတွေ နှာခေါင်းထဲ ရှူမိရင် ကူးနိုင်တယ်။ ဈေးထဲရောက်ရင် သတ်မယ်၊အမွေးချွတ်မယ်၊ခုတ်ထစ်အူကလီစာထုတ်တော့ သွေးတွေ၊ အရည်တွေ၊ မစင်တွေ ကိုင်တွယ်မိရင် ကူးနိုင်တယ်။ကြက်သတ်တဲ့သူ၊ကြက်ကိုင်တဲ့သူတွေက ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ သူတွေ(high risk)ပဲ။
အဲသည်ကြက်သေအစိမ်းတွေကို အိမ်ရှင်မတွေက ၀ယ်တော့ကိုင်မယ်၊စမ်းမယ်၊ရွေးမယ်၊ အသားတွေ၊သွေးတွေ၊ အရည်တွေနဲ့ထိမယ်။လက်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပါလာရင်finger to face (လက်နဲ့မျက်နှာကို ထိပွတ်မယ်) ကူးနိုင်တယ်။ အိမ်ရှင်မနဲ့ အရောင်းဈေးသည်တွေလည်းhigh riskပဲ။အိမ်ရောက်လို့ ခုတ်ထစ်တော့လည်း စဉ်းတီတုံးက တစ်ဆင့် တခြားအစားအသောက်တွေကို ကူးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် လက်ကိုစင်အောင်ဆေးရမယ်။
ကုမုဒြာ။ ။ရောဂါပိုးပါတဲ့ ကြက်သားကိုအကြမ်းဖျင်း ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။ အခုလိုကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆရာမကြီးအနေနဲ့ ကြက်ဘဲအသားနဲ့ ဥတွေစားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ပါမလဲ။
ကြည်။ ။ကြက်သားကိုကြည့်ရင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သွေးနီစက်တွေ အများကြီးရှိနိုင်တယ်။ ကြက်ခြေထောက်တွေ ၊ နှလုံး၊အသည်းနဲ့ လေပြွန်ချောင်းတွေမှာလည်း သွေးအစက်အပျောက်တွေ တွေ့နိုင်တယ်။ဒါဆိုမ၀ယ်ပါနဲ့။၇၀ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်က သေတယ်။ သည်မှာတော့ ချက်ရင်ပွက်ပွက်ဆူပြီးနူးတဲ့အထိချက်ကြတော့ ၇၀ ဒီဂရီထက်မကပါဘူး။ ချက်ပြီးသားစားတဲ့လူကတော့ no riskပဲ။ကိုယ်တိုင်ကြက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပလတ်စတစ်လက်အိတ်လေးတော့ဆောင်ထားရမယ်။လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာဆေးမယ်။ကြက်ဥ၊ဘဲဥမှာလည်း ကြက်ချေးပေတာတွေ ရှိနေတော့ သတိထားရမယ်။H5N1ပါတဲ့ ကြက်ချေးတွေက ဥထည့်တဲ့ဗန်း(tray)တွေမှာ ပေနေမယ်။ အဲသည်ထဲကို ဥခွံကိုဖောက်ပြီး အထဲကိုဝင်နိုင်တယ်။ ကြက်ဥကိုခွဲလို့ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အကာနဲ့အနှစ် ရောနေရင်၊ကြေနေရင်၊ပုံမှန်မဟုတ်ရင် မစားနဲ့။အရေးကြီးတာက လုံးဝအစိမ်းမစားနဲ့။မကျက်တကျက်(half fried)တွေ၊(half boiled)တွေမစားနဲ့။ တကယ်စားချင်တယ်ဆိုရင် သေချာခေါက်ပြီး ကျက်အောင်ကြော်စားပေါ့။လောလောဆယ် ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ မစားသေး ဘူး။ မန္တလေးမှာဖြစ်တုန်းကတော့စားတယ်။
Posted by Alex Aung at 4:36 PM No comments:
(၁) ရှေးနှစ်ပေါင်း ၁၈၀ကျော်ကနည်းပညာကို အခြေခံ၍ ရေကို ဓာတ်ကူလောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုသည့် မီးဖိုထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်နေ*
ရေကို ဓာတ်ကူလောင်စာအဖြစ် အသုံးပြုသည့်မီးဖိုကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း၏ စာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ရပ်၌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစွမ်းဆောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ရွှေနဂါးဦးတင်ဝင်းကပြောကြားခဲ့သည်။ ဓာတ်ကူလောင်စာအဖြစ်ရေကို အသုံးပြုခြင်းနည်းပညာမှာရှေးနှစ်ပေါင်း ၁၈၀ကျော်က အသုံးပြုခဲ့သော နည်းပညာကို အခြေခံ၍ပြန်လည်းဆန်းသစ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊တွင်းထွက် လောင်စာဆီထုတ်လုပ်မှု၊ သုံးစွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းမရှိသည့်ကာလကမော်တော်ယာဉ်များတွင် အီသနောနှင့်ရေ ကိုတွဲဖက်၍အသုံးပြုခဲ့ရကြောင်း၊ဘွိုင်လာများတွင်လည်း မီးထိုးဆီနှင့် တွဲဖက်၍ရေနွေးငွေ့ကို ဓာတ်ကူလောင်စာ အဖြစ်သုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်းကို ဦးတင်ဝင်းက အဆိုပါစာတမ်းဖတ်ပွဲ၌ထည့်သွင်းပြောခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ် လျက်ရှိသည့် ယင်းမီးဖိုမှာရေကို သီးနှံဆီဖြင့်လည်းကောင်း၊အီသနောဖြင့်လည်း ကောင်း၊ကာဗွန်မှုန့်နှင့် Sodium Stearateတို့ဖြင့်လည်းကောင်း အချိုးကျပေါင်းစပ်၍အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသိ ရသည်။၄င်းမီးဖိုမှာ လတ်တလော အခြေအနေတွင် စမ်းသပ်သုတေသနပြုသည့်အဆင့်တွင်ရှိပြီး လာမည့်ဧပြီလ နှောင်းပိုင်းတွင် စတင်ထုတ်လုပ် နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရှိရသည်။ ရေကိုအသုံးပြုသည့်မီးဖိုသည် ထင်း။ မီးသွေးတို့ကို အသုံးမပြုရခြင်း ကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုကိုကာကွယ်နိုင်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိ ရပါသည်။
(၂)စစ်ကိုင်းမြိှု့ရှိကွမ်းယာဆိုင်များတွင် ပလတ်စတစ်အိပ်များအစား စက်ကူအိတ်များအသုံးပြုရန် မြို့နယ်စည်ပင်မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာ*
စစ်ကိုင်းမြို့ရှိလမ်းဘေးနှင့် အိမ်ဝင်းအတွင်း ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလျက်ရှိသော ကွမ်းယာဆိုင်များတွင် ကွမ်းယာထုပ်ပိုး ရာ၌ ပလတ်စတစ်အိတ်အစား စက်ကူအိပ်များအသုံးပြုရန် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ကြေ ငြာထားကြောင်းသတင်းရှိရသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့ရပ်ကွက်အသီးသီးတွင် ကွမ်းယာဆိုင်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ရှိရာ မြို့သန့်ရှင်းသာယာလှပရေးအတွက် ယခုကဲ့သို့ ပလတ်စတစ်အိတ်များအစား စက်ကူ(သို့မဟုတ်) ဖက်ရွက်များခံ၍ထုပ်ပိုးရောင်းချရန် ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ပလတ်စတစ်အိတ်တွေက နှစ်၁၀၀လောက်ကြာမှ ပျက်စီးနိုင်တော့အခုလို စက်ကူအိတ်တွေအစားထိုးသုံးသင့် တာကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ ဆိုင်တိုင်းပြောင်းသုံးဖို့က တော်တော်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပါ”ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ထုတ်ပြန်ကြောငြာချက်အားလိုက်နာခြင်းမရှိသော ဆိုင်များကို စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့အနီးတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ရက်နေ့ နံနက်၁၀နာရီခန့်က မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု တစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသောမီးတောင်သည် ကျောက်ဖြူမြို့နှင့်သုံးမိုင်ခန့်ဝေးသော စိုင်ခြုံအရပ်တွင်တည်ရှိပြီး အမြင့်ပေ ၅၀မှ ၆၀ခန့်သာရှိသော တောင်ကုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပေါက်ကွဲစဉ်က မီးတောင်ချော်ရည်များ အမြင့်ပေ ၁၀၀ခန့်အထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပြီး ပေ၁၅၀ခန့်အထိ ချော်ရည်များပြန့်ထွက်စီးကျခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
“ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရတာဟာ မြေအောက်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့ တွန်းကန်အားကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စိုင်ခြုံဒေသဟာ ရေနံထွက်ရှိတဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ဓာတ်ငွေ့တွန်းအားကြီးမားလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါ တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးလလောက်ကတည်းက ဒီတောင်ဟာ ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အတွက် တောင်အနီးကိုသွားရောက်သူတွေ မရှိသလောက်ပါ။ဒါကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိပါဘူး”ဟု မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်မှူးဦးချစ်ကျော်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယခုသတင်းများအား No.22 Vol.2 March7Wednesday 2007ထုတ်Weekly Eleven Journalမှ တစ်ဆင့်ပြန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Alex Aung at 3:43 PM No comments:
ရန်ကုန်မြို့ အကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့ မြန်မာတိုင်းမ်စာစောင်အသစ်ထွက်တိုင်းဝယ်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတင်နိုင်တိုးရေးတဲ့ မြို့တော်များရဲ့သမိုင်း (မဟာရန်ကုန်)ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးထဲက ကျွန်တော် မှတ်သားထားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို ကူးထားတာကိုပြန်ပြီးဝေမျှချင်ပါတယ်။
လမ်းမတော်မြို့နယ်သည် ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ ရန်ကုန်မြို့ကွက်သစ်အရအစအဦးဒေသဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ လမ်းများကိုလည်း အမှတ်(၁)လမ်းမှအစဉ်လိုက်စတင်ထားပါသည်။အမှတ်(၁)မှ(၄)အထိလမ်းနေရာများမှာ ရှေးအခါက လူနေအိမ်ခြေများရှိခဲ့ဟန်မတူပါ။၀ါးတန်းကြီးလမ်း၌သာ ၀ါးဓနိရောင်းချသူများအခြေချနေထိုင်ခဲ့ ကြသည်။ယင်းလမ်းကို ဗြိတိသျှအစိုးရမြူနီစပါယ်အဖွဲ့အမှုဆောင်အင်ဂျင်နီယာ ကီလီ(Capt.Keighly)အား ဂုဏ်ပြုလျက် ကီလီလမ်းဟုမှည့်ခေါ်ခဲ့သည်။ယင်းလမ်းထိပ်ရှိ ကမ်းနားဈေးကြီးမှာလည်း ကီလီဈေးဟုအမည် တွင်ရာမှ ယခုအခါ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အတွင်း သီရိမင်္ဂလာဈေးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ကီလီလမ်းကို ၀ါးတန်းလမ်းဟုပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်စေခဲ့၏။
အမှတ်(၅)လမ်း(ငှက်ပျောတံတား)နှင့်ကပ်လျက်ရှိ အမှတ်(၆)လမ်းမှာ ကိုင်းတောကြီးအားအစွဲပြု၍ ကိုင်းတန်းဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ဗြိတိသျှတို့ကမူ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဝီလျံ(Lt. William)အားဂုဏ်ပြုကာ ၀ီလျံလမ်းဟုမှည့်ခေါ်ခဲ့ ကြ၏။ အမှတ်(၈)လမ်း(ကျွဲပုတ်တန်း)နှင့်ကပ်လျက်လမ်းသစ်လမ်းကိုမူ ဗြိတိသျှတရားသူကြီးမော်တင်(Morton) အားဂုဏ်ပြုကာ မော်တင်လမ်းဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ထို့အတူ အမှတ်(၁၀)လမ်း(ငပိတန်း)နှင့်ကပ်လျက်လမ်းကို လှည်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနေထိုင်ရာအရပ်ဖြစ်သဖြင့် လှည်းတန်းဟုခေါ်တွင်ပါသည်။ အမှတ်(၁၁)လမ်းကို ရှေးအခါက အထက်ပိုင်းအားဖက်တန်း၊အလယ်ပိုင်းအား ပိုက်တန်းဟုခေါ်ဆို၏။အမှတ်(၁၂)လမ်း(ဖိနပ်တန်း)နှင့် ကပ်လျက်လမ်းကိုမူ ဘုရားငုတ်တိုလမ်းဟုလည်းကောင်း၊သရက်တောကျောင်းတိုက်မှ ဘုန်းတော်ကြီးများဆွမ်းခံ ကြွရာလမ်းဖြစ်သဖြင့် ဘုန်းကြီးလမ်းဟုလည်းကောင်းခေါ်ဆိုကြပါသည်။
အမှတ်(၁၃)လမ်းမှာ ခေါင်ချုပ်တန်းခေါ် ငါးရှဉ့်တန်း၊အမှတ်(၁၄)လမ်းကို ကြောင်တစ်ရာတန်း၊ အမှတ်(၁၅)လမ်း ကို သုံးပင်တန်း၊အမှတ်(၁၆)လမ်းကို ထန်းပင်ကုန်းကြက်သွန်တန်းဟုရှေးကခေါ်ဆိုပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် လမ်းမတော်လမ်းထောင့်ရှိ ယခုဆေးတက္ကသိုလ်(၁)မှာ ၁၉၂၃-၂၄ခုနှစ်က ရန်ကုန်ဆေးကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ဖွင့်လှစ်စက ကျောင်းသား၄၀ကျော်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော် လည်း မြန်မာကျောင်းသားမှာ ၁၀ဦးသာပါရှိခဲ့သည်။ကျန်ကျောင်းသားများမှာ ပန်ချာပီ၊ဘင်္ဂါလီနှင့်အခြားသော ကပြားများသာဖြစ်သည်။ ဆေးကျောင်းသားများသည် ဆေးဝိဇ္ဇာဘွဲ့(M.B.B.S)ရရှိရေးအတွက် ဥပစာသိပံ္ပအောင် မြင်ပြီးခြောက်နှစ်ဆက်တိုက် ပညာသင်ယူကြရ၏။ယင်းသို့ ပညာသင်ယူနေကြဆဲကာလအတွင်း ၁၉၂၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ရက်နေ့တွင် ဆေးကောလိပ်အဆောက်အအုံသစ်ကို မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံ ဆာဟာကုတ် ဘတ္တလာက ပန္နက်ရိုက်ပေးခဲ့သည်။၁၉၈၂ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်မှ အဆောက်အအုံသစ်ပြီးစီးခဲ့ရာ ဆေးကောလိပ် ပထမသုတ်ကျောင်းသားများအဖို့ နောက်ဆုံးနှစ် မီရုံမျှသာရှိခဲ့၏။
ဆေးကောလိပ်ကျောင်းသား၄၀ကျော်မှာ ၁၉၂၉ခုနှစ်နောက်ဆုံးနှစ်၌၁၂ဦးသာကျန်ရှိပြီး ကိုးဦးစာမေးပွဲအောင်မြင် ခဲ့သည်။ထိုအထဲတွင် မြန်မာလူမျိုး ငါးဦးသာပါရှိရာ ဒေါက်တာအေးမူ(ရန်ကုန်ဆေးရုံအုပ်ကြီး)၊ဒေါက်တာဘမောင် (ဆိပ်ကမ်းဆရာဝန်ကြီး)၊သီရိပျံချီဒေါက်တာစိန်မောင်(ဆေးမင်းကြီး)၊ဒေါက်တာဦးတင့်(ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် သီရိပျံချီဒေါက်တာထွန်းမင်း(မြူနီစပါယ်ကျန်းမာရေးအရာရှိ)တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဦးဖိုးတုတ်သည် ကိုလိုနီခေတ်ကာလက အလွန်ထင်ရှားခဲ့သည့်ူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်၏။ လမ်းမတော်တွင်နေထိုင်သဖြင့် လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ဟုအမည်တွင်ပါသည်။ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်သည်လူဆိုး လူမိုက်တစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သော်လည်း ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူ၊စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းသူ တစ်ဦးဟု ဆိုပါသည်။ကိုလိုနီခေတ်က နိုင်ငံရေးသမားများ မဲများစွာရရှိရေးအတွက် လူဆိုးလူမိုက်များနှင့်ပေါင်းသင်းကြရရာ မှ ဦးဖိုးတုတ်၏ သြဇာအာဏာအတော်အတန်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။လမ်းမတော်ဖိုးတုတ်ခေါ် ဦးဖိုးတုတ်သည် လူဆိုးလူမိုက်တစ်ဦးအဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့သော်လည်း ပုလိပ်(ရဲ)အဖွဲ့ကို များစွာအကူအညီပေးခဲ့သည်ဆို၏။ ရဲမင်းကြီးဟောင်ဦးခင်မောင်၏မှတ်တမ်းအရ “ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ခဲ့ရသော လမ်းမတော်တိုက်နယ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ရာဇ၀တ်မှုအများအပြားတွင် အမှုစစ်အရာရှိများသည် ဦဖိုးတုတ်၏ အကူအညီဖြင့် အမှုများမှ အလိုရှိသော တရားခံများ၊သက်သေခံပစ္စည်းများ၊သက်သေခံစသည်တို့ကိုရယူကြရ၏” ဟူ၍ဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရသည်။
Posted by Alex Aung at 1:28 PM No comments:
This isaguide to basic kissing, i.e.
you learn the basics and get the basics
right, then experiment and try different
styles and more advanced techniques.
1. Brush your teeth, getagood bath,
nicely groomed and clean and fresh,
before meeting the other person. There's
nothing worse than kissing the rear end
ofagarbage truck
2. Get intoacomfortable position - you
can't kiss if your back feels like it's
gonna break. Suggestion - Sit side by
side onacomfy sofa.
3. Hold your lover, firmly but gently -
don't cause pain. Suggestion would be to
hold the shoulders, the neck or gently
on the side of the face, one side or
4. Move your faces closer. Don't bump
noses. Suggestion would be the guys angle
his face slightly so you don't bump noses.
5. Kiss gently, normal closed lips
kissing, and close your eyes. Closing
your eyes increases the sensations you
feel, and also sets the mood.
6. Continue kissing gently. Get
comfortable with simple closed lips,
lip-to-lip kissing before going anywhere
7. If fine till here, tentatively,
slowly and lightly draw your tongue
across the other person's lips.
8. Chances are from here, if the other
person lightly parts her tongue; slowly
explore the other person's tongue in a
light licking motion.
9. The tongue hasavery sensitive
surface, which is why tongue to tongue
is the essence of French kissing.
10. After you've tried lightly licking
the other person's tongue, you can try
sucking on it, wrestling with it (see
if you can hold it to the floor of her
mouth) and other things like that.
11. Explore the other areas of the
mouth. Especially the roof of the mouth.
Lightly lick, or tickle the area with
12. Don't bite. Whatever you do, don't
13. Don't swing your tongue round and
round likeawindmill. Explore lightly,
don't drill your way through.
14. Breathe through your nose. Breathe
through your nose. I say again, breathe
15. Follow so far? You can lightly use
your hands too, lightly rubbing the
other person. Suggestions, along the
waist, along the back, the arms,
especially the inside of the arm, the
neck, maybe running your fingers through
her hair. Again, don't cause pain.
16. Continue kissing.
Posted by Alex Aung at 5:51 PM No comments:
အခု ကိုယ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာစောင်ထဲကဖတ်ဖြစ်တာလေး ပြန်ဝေမျှချင်ပါတယ်။ လူငယ်တွေအတွက် အလေးချိန်တိုးစေနိုင်မယ့် အပြုအမူ၊အနေအထိုင်၊စားသောက်မှုတွေကို မြေလှန်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ၀န်မလေးသင့်သလို ကျန်းမာစွာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်လျှော့ စေဖို့ နည်းပေါင်း(၁၅)နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဖော်ပြခဲ့တာတွေနဲ့ မတူတာကလူငယ်တွေပြုမူတဲ့အပြုအမူတွေပေါ် မူတည်ပြီးအကြံပေးထားတာပါ။
(၁)အစားအသောက်တွေကို စားမယ်ဆိုရင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ၀ယ်စားပါ။ စားမယ့် စားစရာတွေကို ကြိုပြီးဝယ်မထားပါနဲ့။၀ယ်ထားမိရင်လည်း မြင်လွယ်တဲ့နေရာမှာ မထားမိ အောင် ကြိုးစားပါ။
(၂)ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အစားအသောက်တွေကို မြင်သာတဲ့ နေရာမှာထားပါ။ဥပမာ- အရည်ရွှမ်းသော အသီးအနှံများ၊အသီးအရွက်များ။
(၃)နံနက်စာကို ပြည့်ပြည၀၀ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စားပါ။ကိုယ်အလေးချိန် တိုးသူတွေ ဟာ မနက်စာကို ဂရုတစိုက် မစားတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
(၄)ကယ်လိုရီများများပါတဲ့ ဖျော်ရည်တွေကိုလည်း သတိထားရှောင်ပါ။တချို့ဖျော်ရည်တွေ ဟာ တစ်ဘူးမှာ ကယ်လိုရီ ၄၅၀လောက် ရှိတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
(၅)ချက်ပြုတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို စားပွဲပေါ်မှာ ထမင်းစားချိန် မဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်မထားပါနှင့်။
(၆)အဆီမပါတဲ့ ဟင်းရည်ကို များများသောက်ပေးပါ။ဒါမှလည်း ထမင်းဟင်းကို များများ စားခြင်းမှ ရှောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၇)အသား၊ငါး ဟင်းလျာကို ဘယ်နှဖတ် ယူစားမလဲဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပါ။ လိုတာထက် ပိုမစားမိအောင် သတိထားပါ။
ဂ)အလုပ်မရှိဘဲ မီးဖိုဆောင်ထဲမနေပါနှင့်။အစားအသောက်ရှိတဲ့နေရာမှာ အနေကြာရင် အမှတ်မထင် မဆာဘဲနဲ့ ဟိုအစား ကောက်စား၊သည်အစားကောက်စားမိတတ်ကြပါတယ်။
(၉) အစားအသောက်ကို အနံ့အရသာ ခံပြီးစားပါ။ဒါမှလည်း စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပြီး အနံ့ရှူရုံနဲ့ လည်း ၀သွားနိုင်ပါတယ်။အငမ်းမရ ပလုတ်ပလောင်း စားတတ်သူတွေ အစားပိုဝင်တတ်ပါ တယ်။
(၁၀)စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံရချိန်မှာ အစားအသောက်ဖိစားဖို့ မကြိုးစားပါနှင့်။ အသက်ကို ပြင်းပြင်းနဲ့မှန်မှန် ရှူပြီး အနားယူသင့်သလို ရေနွေးကြမ်းပူပူကို အေးအေးဆေးဆေး သောက်နေနိုင်ပါတယ်။
(၁၁)အစားအသောက်စားနေစဉ်မှာ စာဖတ်ခြင်း၊တီဗွီကြည့်ခြင်း၊စာရင်းဇယားလုပ်ခြင်းများ ကိုရှောင်ပါ။
(၁၂)ညစာ စားပြီးတဲ့ အခါမှာ အိမ်အပြင်ထွက်ပြီး လမ်းလျှောက်ပါ။အညောင်းအညာ ပြေပြီး အစာလည်း ကြေပါလိမ့်မယ်။
(၁၃)အစာစားပြီးတိုင်း သွားတိုက်ကျင့်လုပ်ထားပါ။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ အစာ ထပ်စားချင်စိတ်ကို စောင့်ထိန်းထားနိုင်တဲ့အတွက်ပါပဲ။
(၁၄) ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကို သတ်မှတ်ချက်ထားပြီး စားသောက်ပါ။ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်များဟာ သောက်စမှာ အကြောအခြင်များ နိုးကြွ ပြီး အလုပ်လုပ်လို့ ကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ကြာလာတဲ့အခါ တွေဝေပြီး စိတ်မကြည် မလင်ဖြစ်တတ်သလို အလိုဆန္ဒတွေကိုလည်း မဆင်မခြင် လိုက်လျောတတ်ပါတယ်။
(၁၅)ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာတွေဟာ သိမ်းထားဖို့မဟုတ်ပါ။ကိုယ်လည်း စား၊ ပတ်ဝန်း ကျင်မှာရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလည်း ပေးလှူပါ။
Posted by Alex Aung at 2:03 PM No comments:
၀တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဟန်ပန်(LifeStyle)နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိမယ့် နည်းလမ်းအသွယ် သွယ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်အချရဆုံး နှင့်အကောင်းဆုံးပေါင်ပိုတွေ လျှော့ချပစ်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ မျှတသင့်တင့်တဲ့ ကယ်လိုရီ ထိန်းသိမ်း စားသုံးမှုနှင့်အတူ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းပါပဲ။ ၀ိတ်ချချင်လို့ အဲ....ကိုယ်အလေးချိန်ချချင်လို့ ကိုယ်စားနေကျအစီအစဉ်ကို ပြောင်းဖို့မလိုပါ ဘူး။စားနေတဲ့ ပမာဏကိုသာ ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန် နည်းနည်းပါးပါးချချင်ရုံ ကတော့ တစ်နေ့ကယ်လိုရီ၂၃၀၀စားရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတာကို ၁၀၀၀လောက်လျှော့ချ ပြီးစားလိုက်ရုံနှင့်ရပါတယ်။တကယ်လို့ အတော်ကလေး ကျသွားစေချင်ရင်တော့ တစ်နေ့ ကယ်လိုရီ၁၂၀၀နှုန်းနှင့် ရက်ကြာကြာလေးစားသွားမှ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံဝ်ိတ်ချရမယ့်ကျင့်စဉ်က သကြားဓာတ်နှင့် ပြည့်ဝဆီကို လျှော့စားပြီး အမျှင်ဓာတ် (ဖိုင်ဘာဓာတ်)နှင့်ကစီဓာတ်(ကော်ဓာတ်)ပိုစားပေးဖို့ပါပဲ။ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင် မှုကိုကောင်းကောင်း အားဖြည့်ပေးနိုင်လောက်တဲ့ အဟာရဓာတ်ပြည့်အစားအစာတွေကို စားနေရင်းက သင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီအလုံအလောက်ရဖို့လိုပါတယ်။ (အချုပ်က အဟာရဓာတ်လည်းကြွယ်ဝစေ၊ကယ်လိုရီလည်း လုံလောက်စေမယ့် တစ်ချက် ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အစားအစာမျိုးကိုစားဖို့ပါပဲ)
ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ထက်ထက်ကျသွားတဲ့ ကိစ္စဟာလိုလားစရာပါ။ဒါပေမဲ့ နောက်ဖြစ် လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။ ခံတွင်းတွေ့တတ်တဲ့ အစားအစာနှင့်စားသောက်ပုံအကျင့်ဓလေ့ကိုပြုပြင်ပြီး အကျင့်လုပ်ပေး သွားဖို့လိုပါသေးတယ်။ပြီးတော့လည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း ပြန်ပြန်ပြီး အကဲဖြတ်(စစ်ဆေး)ဆန်းစစ်နေရပါလိမ့်မယ်။ဒါမှသာ ကိုယ်အလေးချိန်ချနိုင်ပြီး သွယ်သွယ်လျလျကိုယ်လုံးအလှကိုထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သုံးလေးငါးရက်လောက် အတွင်းမှာ မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို အောင်မြင်မှုရမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ထားနိုင်မယ် မဟုတ်ဘူး.။ သို့ပေမဲ့ သင့်တင့်မျှတအောင် အစားကောင်းကောင်းစားမယ်၊ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းယူမယ်ဆိုရင် တော့ သုံးလေးပတ်အတွင်းမှာ အရင်နှင့်မတူ တိုးတက်မှုတွေကိုတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။အောင် အောင်မြင်မြင်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အောင်လုပ်ယူတာ မျိုးနှင့်တူလှပါတယ်။ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခု ရရှိဖို့ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တစ်ခု ထားရပါလိမ့်မယ်။ဒီပန်းတိုင်ရှိပါမှ ရှေ့ဆက်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတစ်ရပ်ရရှိစေမှာ ပေါ့။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ဆိုရင် သင့်ရဲ့ခန္ခာကိုယ်က နေ့စဉ်လောင်ကျွမ်းပစ်လိုက်တာထက် ပိုနည်းတဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏကိုစားပေးရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဒီပမာဏချင်း တော့ကွာပါမယ်။ပမာဏ အတိအကျသိရဖို့က သင့်ရဲ့တစ်ကိုယ်ရေ ခန္ခာဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်မှုပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။သင့်ကိုယ်ခန္ခာမှာ အဆီဘယ်လောက်များနေသလဲ၊ သင့်ခန္ခာကိုယ်ရဲ့ အစာချေဖျက်ပြီး ခွန်အားဓာတ်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ စနစ်ကဘယ်အနေ အထားမှာရှိသလဲ၊၀ိတ်စလျှော့မယ့်အချိန်က ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ စတာ တွေပါပဲ။ အကြမ်းဖျင်းအနေနှင့်တော့ ကိုယ်အလေးချိန်စချချိန်က ဟဲဗီးဘော်ဒီကြီးဖြစ် လေ၂၁ရက်ကနေ တစ်လအတွင်းဘောဒီဝိတ် ပိုအကျများလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တို့ ခြေတို့လိုနေရာမျိုးတွေကျတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ချရတာ ရက်ပိုကြာတတ်ပါ တယ်။ဒါမျိုးကျတော့ လေ့ကျင့်ခန်းယူရတာ တကယ့်ကိုအထောက်အကူရစေပါတယ်။ ဒုက္ဓပေးနေတဲ့ ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့နေရာကို အထူးပြုလေ့ကျင့်ခန်းယူပေးရင် ကိုယ်အလေး ချိန်မြန်မြန်ထက်ထက် ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကလည်း အစားအစာကို ချင့်ချိန်ဆင်ခြင်စားသောက်နေရတယ်။အပြင်ထွက်စားဖို့က လည်းရှိတယ် ဒီလိုအချိန်တွေမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာက အတော်ပညာသားပါတဲ့ ကိစ္စပါ။၁၉၈၀ပြည့်လွန်နှစ်တွေက ကိုယ်လုံးသွယ်သွယ်လေးတွေ တအားခေတ်စားချိန် အထွတ်အထိပ်ကာလမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ချို့က သူတို့ဆိုင်ရဲ့မီနူးမှာချင့်ချိ်န်စာ ရွေးချယ် စားနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာ ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေပေး တဲ့ဆိုင်တွေနည်းသွားပါပြီ။ဒါကအစားဆင်ခြင်ချိန်ဆစားသုံးတာ ခေတ်မစားတော့လို့ပါပဲ။ ချင့်ချိန်စားသောက်တာလည်း မပျက်ရအောင်၊စိတ်ထဲမှာဒါကိုအမြဲစဉ်းစားနေရတဲ့ ဖိစီးမှုမျိုး လည်းမပေါ်ရအောင် အပြင်ထွက်စားတဲ့အခါဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁)ဟင်းရွက်သုပ်ကိုစမှာစားပါ။ (၂)ပေါင်မုန့်မစားပါနှင့်။ဒါမှမဟုတ်လည်း ပေါင်မုန့်ကိုထောပတ်မသုတ်ဘဲစားပါ။ဒါလည်းပဲ ခံတွင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ (၃)၀ိုင်တစ်ခွက်ပဲသောက်ပါ။ရေကိုတော့ များများသောက်ပါ။ (၄)အဓိကဟင်းလျှာတစ်မည်ကိုသာရွေးချယ်စားသုံးပါ။ငါးကင်လို၊ကြက်ကင်လို ဟင်းလျာ မျိုးပေါ့။ဆော့(Sauce)ဆိုတဲ့စားမြိန်ရည်များများ၊ထောပတ်နိုင်နိုင်နှင့်ချက်ထားတာမျိုးတွေ ရှောင်ပါ။ (၅)အဆီနည်းတဲ့ သာမန်အချိုပွဲတစ်ပွဲစားပါ။သီးစုံရေခဲသုပ်(Sorbet)ကတော့ အကောင်း ဆုံးပါပဲ။ (၆)ဆေးလက်ဖက်ခြောက်ရည်ကို အစာပိတ်သောက်ပါ။(ပက်ပါမင့်ပါတာက လူကိုပိုလန်း ဆန်းစေပြီး ဗိုက်တောင့်တာ၊ဗိုက်အောင့်တာ၊အစာမကြေတာကို သက်သာစေပါတယ်။) တကယ်လို့ ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်သောက်ရမှဆိုရင်လည်း နို့နှင့်ဖျော်သောက်ရတဲ့ Cappuccinoမသောက်ဘဲ ကော်ဖီခါးခါး ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီကြမ်းပဲသောက်ပါ။
တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် အိပ်ရာထခါစမှာ ဦးဆုံးအနေနှင့်ပေါင်ချိန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မျှော်မှန်း ထားတဲ့ ၀ိတ်ချဇယားတစ်ခုကို ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတာ(တက်သွားတာ)မှတ်သားဖို့ ရေးဆွဲထားရင် သင့်ကိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါမှ မဟုတ်ရင် လည်းပေါင်ချိန်စက်ကိုမေ့လိုက်ပစ်လိုက်ပါ။ အင်္ကျီတွေဝတ်ရတာချောင်လာသလားကျပ် သွားသလားဆိုတာကိုပဲ ဆန်းစစ်ခံစားကြည့်ပေါ့။ကျပ်ကျပ်တင်းတင်းဝတ်ခဲ့ရတဲ့အင်္ကျီ တွေချောင်ချောင်ချိချိဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့။ဒါဟာ ကိုယ်ရည်စစ်သွားတာ သေချာတဲ့ လက္ခ ဏာတစ်ခုပဲပေါ့။နောက်တစ်နည်းကတော့ ခါးရင်တင် အတိုင်းအတာမှတ်တမ်းတစ်ခု ထားချင်ထားပေါ့။ပြီးရင် ၂၁ရက်အကြာမှာ ဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသလဲ စစ်ဆေးကြည့်ပေါ့။ဘယ်နည်းက အလုပ်ဖြစ်သလဲဖြစ်တာကို လုပ်ပေါ့နော်။
-ဖြစ်နိုင်ရင် မနက်ပိုင်းမှာ များများစားပေးပါ။ကယ်လိုရီတွေလောင်ကျွမ်းချိန်ရပြီး ခွန်အားဖြည့်စွမ်းနိုင်စေဖို့ပါ။ -အစားလျှော့စားပါ။တစ်ခါတစ်လေရင်တုန်ပန်းတုန် စာလောင်လာတဲ့အထိအဆာခံနေ လိုက်ပါ။ -ရေများများသောက်ပါ။ -သရေစာကြိုက်ခဲ့ရင် လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးဝလံအစိမ်း၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစိမ်းနှင့် စပျစ်သီးခြောက်တွေကို အနီးအနားမှာ ဆောင်ထားပါ။ -ပိန်ဆေးတွေ(Silmming Pills)၊ ဆီးရွှင်ဆေးတွေ(diuretics)၊ ၀မ်းနုတ်ဆေးတွေ(Laxatives)ကို ကိုယ်အလေးချိန်မြန်မြန်ကျအောင်ဆိုပြီး မှီဝဲဖို့ မကြိုးစားပါနှင့်။ ဒါတွေ ကကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ သဘာဝသဟဇာတဖြစ်စဉ်(body's natural equilibrium)ကိုက ပြောင်းကပြန်ဖြစ်စေပြီး မူလအတိုင်း ပြန်တည့်မတ်ဖို့ အချိန်အတော်လေးယူတတ်တာ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ -ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းယူပါ။ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းလေးပိုလုပ်ရင် ကယ်လိုရီတွေကို ကုန်ခန်းသွားအောင် အသုံးပြုတတ်ပါတယ်။ဒါက ကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့မှာ မရှိမဖြစ်ပါ။ -အရင်အတိုင်းပြန်ပြန် ၀သွားတတ်တာကြောင့် စိတ်ပျက်မသွားပါနှင့် မကြာခဏလမ်း ကြောင်းပြောင်းသွားတာဟာ ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ။တတ်နိုင်တာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ယူ၊ ချင့်ချိန်စားသောက်တာပြန်လုပ်ရင် အချိန်ကြာတာနှင့်အမျှ ပင်ပန်းခံထားတာ အလဟ ဿမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကနဦးမတော့ ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနည်းတော့တက်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုလို လားလားကြီးကို ကြံ့ခိုင်ကျန်းမာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပစ်ဖို့ကလွဲလို့ရွေး ချယ်စရာလမ်းမရှိပါဘူး။ဆေးရွက်ကြီးဟာအဆိပ်ပါ။ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ဦးဖြစ်နေလို့ ကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တာဟာကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ရှင်သန်ခြင်းဘ၀ပုံစံနှင့် ဆက်လက် နေထိုင်သွားဖို့အတွက်တကယ့်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ ခုန်ပျံကျော်လွှားဆုလာဘ်ကြီးတစ်ခုပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမယ့်အစားအသောက်ဆင်ခြင်တာကို နောက်မဆုတ်တမ်းလိုက်နာ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပါက ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်လို့ တစ်နေ့လုံးပါးစပ်တလှုပ်လှုပ်နှင့် ပါးစပ် အအားမထားစားချင်နေမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းစိမ်းနှင့် စပျစ်သီးခြောက်တွေကို လက်တစ်ကမ်းမှာထားပြီး ၀ါးနေလိုက်ရုံပါပဲ။
ပုံမှန်စားနေကျအတိုင်း မစားဘဲ အနပ်ကျော်စားစားသွားရင် ၀ိတ်မြန်မြန်ကျသွားမလား အနပ်ကျော်စားပြီး အငတ်ခံတာမျိုး မကြိုးစားကြည့်ပါနှင့်။တစ်နပ်အငတ်ခံနေလိုက်တယ်ဆို ပါတော့ ဗိုက်တအားဆာပြီး နောက်စားလည်းစားရော အလွန်အကျွံပိုစားမိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို နှေးကွေးသွားစေပြီး ဒါကကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်း တာကို လုံးဝနှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်။
လုံးဝရှောင်ကြဉ်ဖို့ရာ ချောကလက်၊ဘီစကွတ်၊ဆီကြော်ကိတ်၊အချိုရည်အမျိုးမျိုး၊ကိတ်မုန့်၊ရေခဲမုန့်၊အချိုကဲသီးနှံ ပြုတ်။ဒီနေရာမှာ သကြားပါတဲ့ အရာအားလုံးကိုဆိုလိုချင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာ ကယ်လိုရီ သက်သက်လောက်ပါပဲ။ဆိုပါစို့ ချောကလက်တောင့်တစ်တောင့်မှာ ကယ်လိုရီပမာဏ ၂၃၀ပါပါတယ်။ အဟာရတန်ဖိုး(food value)လုံးဝမပါသလောက်ပါပဲ။ စားသုံးသင့်တဲ့ အစာတစ်ချို့ လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအရွက်အဆာပလာတွေနှင့် စီမံထားတဲ့ ဆင်းဒွစ်တစ်ခုဟာ ကိုယ် အလေးချိန်ချချင်သူတွေအတွက်တော့ သင့်တော်တဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် နေ့လယ်စာ ပေါ့။ အဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဂျုံမှုန့်ညက်လို ကစီဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေဟာ အဆီနည်း တဲ့ဆော့စ်စားမြိန်ရည်တွေနှင့်တွဲစားရင် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးပြီးဝလာတာမျိုးမဖြစ်စေနိုင် ပါဘူး။ အဟာရပညာရှင်တွေနှင့် အခြားဆေးဝါးပညာရှင်တွေက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သစ်သီး ၀လံတွေနေ့တိုင်းစားပေးဖို့ အကြံပြုကြပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 1:59 PM No comments:
စင်ကာပူရုပ်ရှင်မင်းသမီး အွန်း(Ong)ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အကြံပေးချက်ခြောက်ချက်အကြံပေးချက်တွင်နှစ်ပိုင်းပါရှိပြီး ပထမပိုင်းတွင် လေ့ကျင့်ခန်း၊ဒုတိယပိုင်းတွင် ဓာတ်စာ ဖြစ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအပိုင်းတွင် အချက်သုံးချက်ပါရှိပြီး ဓာတ်စာအပိုင်းတွင်လည်း သုံးချက်ပါရှိပေသည်။ လေ့ကျင့်ရန်သုံးချက်မှာ - (၁) ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေစဉ် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် တီဗီပြီးမှ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီတစ်သက်ဘယ်တော့မှ လုပ်ဖြစ်မည် မဟုတ်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ တီဗီကြည့်ရင်း အညောင်းပြေ အညာပြေကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထမင်းစားပြီးချိန်တွင်တော့ ရှောင်ကြဉ်ရပေမည်။ ယခုခေတ်တွင် ဗီဒီယိုအခွေနှင့်အတူ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း၊ အေရိုးဗစ်အခွေများ လည်းပေါ်နေပြီမို့ ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်၍ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် အဆင်ပြေနိုင်ပေသည်။ လေယာဉ်စီးရင်းနှင့်ထိုင်လျက်လေ့ကျင့်၍ရသော ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းများလည်း ရှိနေသည်။ထိုင်ရင်း ထရင်း အိပ်ရင်း လဲလျောင်းရင်း လမ်းသွားရင်း အရိယာပုတ်လေးမျိုး လုံးတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သွားနိုင်ပေသည်။ (၂)အပတ်စဉ် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာတစ်ခုမှာ လမ်းလျှောက် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန်၊ ဥပမာ- အိမ်ထဲတွင် ဖြစ်စေ၊ခြံထဲတွင်ဖြစ်စေ၊အများပိုင် ပန်းခြံ၊အပန်းဖြေဥယျာဉ်ထဲတွင် ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ပေသည်။ (၃)တတိယလေ့ကျင့်ခန်းမှာ ညစာစားပြီး ထမင်းလုံးစီပြီးသည်နှင့် နီးနီးနားနား ၀န်းကျင်တစ်လျှောက်မှာ ရွရွလေးလမ်း လျှောက်ရင်း အစာခြေရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ တေဇောဓာတ်အားကောင်း၍ ၀မ်းမီးအား ကောင်းပြီး စားသမျှအစာကြေကာ ခွန်အားပြည့်ဖြိုး အလှတိုးလာမည်ဖြစ်ပေသည်။ဒုတိယပိုင်းမှာ ဓာတ်စာဖြစ်ပေသည်။(ဓာတ်စာဆို၍ အချို့ဆေးဆရာတွေပေးသည့် ငါးသလောက် မစားနဲ့၊ ငါးကြင်းသား၊တညင်းသီး မတို့နဲ့ သံပရာသီးစား အဲဒါမျိုးတွေ မဟုတ်ပါ။) အစာစားရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များဖြစ်ပါသည်။ (၁) ပထမအချက် ဘူဖေး စပရက်ဒ်စ်(Buffet Spreads)ခေါ် ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ပေါက်တတ်ကရ အမည်များ လျှောက်စားခြင်း မပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် စားရန်ပင်၊အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာပါပဲ။ လှချင်ရင် စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့စားပါ ဟူ၍တိုက်တွန်းထားပါသည်။ (2)ဒုတိယအချက် အဆီဓာတ်ပေါကြွယ်ဝသော အသားဓာတ်များသော အနီရောင်ရှိသော အသားကြမ်းများကို သတိထားစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ သွေးထဲမှာ ကိုလက်စထရောများလျှင် အန္တရာယ် ရှိပေသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ကိုလက်စထရော လျှော့နေသော အချိန်၌မိမိလည်း လိုက်လျှော့ပါ။ သို့မှသာ ခေတ်မီမည်ရာရောက်၍ အန္တရာယ်ကင်းမည်။ ပြီးတော့ လှသွေးပိုကြွယ်လာမည် ဖြစ်သည်။ (၃) လတ်ဆတ်သော အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားရန် အရည်ရွှမ်းသော အသီး၊လတ်ဆတ်သော အသီးတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ရေဓာတ်နှင့် ခွန်အား ဓာတ်ကိုဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ပေသည်။ အသားတွင်းမှ(အသားဓာတ်) ပရိုတင်းပါသည်ဟု မမှတ် ယူစေလိုပါ။ ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊အာလူးနှင့် ပဲအမျိုးမျိုးတို့တွင် လည်း အသားဓာတ်ကြွယ်ဝပေသည်။လတ်ဆတ်သော အနေအထားတွင် စားရန်သာ အရေးကြီးပေသည်ဟု ညွှန်းဆိုထားပါသည်။
Posted by Alex Aung at 1:45 PM No comments:
ခါးနှင့်တင်ရှိသင့်သည့်အချိုး(Waist to Hip Ratio)ကို လိုချင်သိချင်ရင် ခါးပတ်လည် အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ) ကို တင်ပတ်လည်အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ)နှင့်စားကြည့် ပါ။ အမျိုးသားတွေအတွက်ရှိသင့်တဲ့ ခါးနဲ့တင်အချိုး(Healthy Waist To Hip Ratio) ဟာ 1.0အောက်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများအတွက်ကတော့ 0.8အောက်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားဖြစ်စေ၊အမျိုးသမီးဖြစ်စေ သည်အချိုးနဲ့ကိုက်ညီစွာရှိနေမယ်ဆိုရင် ၀လာပေမဲ့ အလှမပျက်သေးဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်အတွက်ရှိသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း(Body Mass Index)အနေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်းတွက်ယူသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းကို လိုချင်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်(ကီလို) ကို အရပ်အမြင့်(မီတာ) နှင့်စားပါ။နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ကတော့ (ပေါင်x၀.၄၅)ကီလို ကို (လက်မx၀.၂၅၄)မီတာ နှင့်စားရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးအတွက်ရှိသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်းဟာ ၂၀မှ၂၄.၉အတွင်း ဆိုရင် အလွန်ကျန်းမာရေးကောင်းသူပဲဖြစ်တယ်။ ၂၀အောက်ရှိသူနဲ့ ၂၅အထက်ရှိ သူတွေဟာ ကိုယ်လက်မအီမသာနှင့်တရှောင်ရှောင်ရောဂါဖြစ်လေ့ရှိသူများပဲဖြစ်ပါတယ်။ သည်အဆင့်ဟာ အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပြီးလျော့သင့်တဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာ ကိုယ် ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း ၃၀ကျော်သွားပြီဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို အလွန်ဝနေကြောင်းသိရပါ မယ်။
့ပုံမှန်စား၊ပုံမှန်လေ့ကျင့်လှုပ်ရှားပါ။ အစားလည်းကောင်းကောင်းစားပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလည်းပုံမှန်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ ဗိုက်က တော့ပူတာပါပဲတဲ့။ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့နဲ့ လှပဖို့အတွက် အစာကိုလည်းမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပုံမှန်စား သလို၊လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ အနေအထားအလိုက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက စားတာသောက်တာ တစ်ခုထဲကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားမလှတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ စားလာတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား လှုပ်ရှားမှုမညီလို့သာ၊ ၀တာတို့ ဗိုက်ပူတာ တို့ဖြစ်တာလေ။ဆင်ချင်ရမယ့်အချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်လား။ လုပ်သင့်တာ၊ မလုပ်သင့်တာနှစ်မျိုးခွဲခြား ကြည့်ရအောင်နော်။
(၁)အစားအသောက်ပုံမှန်စားသောက်ပါ။အထူးသဖြင့်နံနက်စာစားတဲ့အချိန်မှာ နေ့စဉ် ပုံမှန် စားသောက်တဲ့အလေ့အကျင့်ကို ပြုလုပ်ပါ။ညနေစာကိုတော့ များများနဲ့တအားကြီး မစားမိဖို့တော့လိုတယ်။မနက်ပိုင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုတွေများသလောက်၊ညပိုင်းမှာ လှုပ်ရှားမှု နည်းတဲ့အတွက် ညစာများများစားထားမိရင် အစာမကျေရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်တတ်တယ် နော်။နောက်တစ်ခုက ကယ်လိုရီဓာတ်သိပ်နည်းလွန်းတဲ့အစာ စားသောက်တာမျိုးကို မစားသင့်ဘူး။စားသင့်တဲ့ ကယ်လိုရီပါအောင်တော့ စားရမယ်နော်။ (၂)အသား၊အသီး၊အသီးအရွက်နဲ့ Cholesterolနည်းတာကိုစားသုံးသင့်ပါတယ်။ (၃)ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။အစာစားပြီး ခဏလောက်မတ်တပ်ရပ်ပါ။ ဟိုနားဒီနားလမ်း လျှောက်ပါ။ လှဲအိပ်တာတို့၊မှိန်းတာတို့ မလုပ်ရဘူးနော်။ (၄)အစာစားသောက်တဲ့အခါ များများနဲ့ မြန်မြန်စားသောက်တဲ့အကျင့်ရှောင်ပါ။ဖြေးဖြေး မှန်မှန်စားသောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ၀မ်းဗိုက်ထဲမှာ လေတွေနဲ့ပြည့်ပြီး နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုသတိထားရမှာက Stressကိုလည်းပိုများစေတယ်နော်။ (၅)ပိန်ဆေးတွေသောက်ပြီး ပိန်အောင်လုပ်တာအန္တရယ်ကြီးပါတယ်။ အစာမစားတဲ့ဆေး တွေသောက်ပြီး အစာလျှော့စားရင် လေနာ၊ဗိုက်ကအောင့်၊လေရောဂါတွေဖြစ်ပြန်ရော။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အစာကိုစားပြီး၊စားထားတဲ့ အစာနဲ့ညီမျှတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ ထပ်သတိပေးချင်တယ်။(၆)ဆေးလိပ်ကိုဖြတ်၊အရက်ကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။ကော်ဖီကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်။ (၇)ရေများများသောက်ဖို့လိုတယ်။တစ်နေ့ကိုရေနှစ်လီတာခန့် သောက်ရပါမယ်။ (၈)အစာစားတဲ့အခါ မှန်မှန်စားသောက်ဖို့လိုတယ်။အစာ စားတဲ့အခါ ဆီများအစပ်များတဲ့ အစာကိုရှောင်ပါ။၀မ်းဗိုက်ကလေတေါကို ပိုပွပြီးဝမ်းဗိုက်ကို ပိုပူစေတယ်လေ။ (၉)၀မ်းဗိုက်ကိုMessageလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။၀မ်းဗိုက်ထဲမှာလေတွေပြည့်နေတာ ပူဖောင်းထဲ လေသွင်းထားသလိုဖြစ်နေတယ်လေ။Messageလုပ်လိုက်တာနဲပ လေတွေက တခြားနေရာ ကို ရွေ့သွားလိမ့်မယ်။၀မ်းဗိုက်ထဲမှာလေတွေ လျော့သွားတော့ ပိုပြီးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်း မယ်လေ။ အဲဒါတွေကတော့ ဗိုက်မှာအဆီစုနေတဲ့ ဗိုက်ပူသူတွေလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပါပဲ။ အစာလျော့စားတာတင်မကဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းပါတွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အလျင်အမြန်ဆုံးကိုယ်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရရှိမှာမလွဲပါဘူး။
Posted by Alex Aung at 1:40 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 1:25 PM 1 comment:
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရချင်းအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် လေ့လာမိ သလောက်လေးတွေပြောကြည့်ပါ့မယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်မေးတဲ့ ဟာတွေကို ပြန်ဖြေထားတဲ့ အဖြေလေးတွေကိုပြန်ဖော်ပြလိုက်မယ်နော်။ပလန်းနက်မှာ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တာလေးပါ။(၁)တစ်ကိုယ်တည်းနေကျင့်ရှိသူ၊အပေါင်းအသင်းနည်းသူများတစ်ကိုယ်တည်းနေတတ်တော့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိရင် လူ့စိတ်သဘာဝအရ လိင်ကိစ္စကိုစဉ်းစားမိတာ ကြောင့် အာသာဖြေမိတာ။အိမ်မှာတစ်ကိုယ်တည်း အခန်းထဲမှာနေနေရင်းလုပ်မိသွားတာမျိုး။ (၂)ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူတွေမှာ ယောက်ျားလေးဖြစ်စေ၊မိန်းကလေးဖြစ်စေ အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်း ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါဟာ သဘာဝအရဖြစ်တာဖြစ်ပြီး ဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ ကလေးကနေဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ ရောက်လာတယ်ဆိုတာ သိသာနိုင်တဲ့ အသံပြောင်းတာ၊လိင်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေ ကြီးထွားလာတာပါသလို အဲဒီအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလည်း လှုပ်ရှားစပြုလာပါပြီ။ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း သူ့ခန္ဓာရဲ့ ပြောင်းလဲလာတဲ့တောင့်တ ချက်ကိုဖြေသိမ့်ဖို့ ကြိုးစားချင်လာပါတယ်။ဒါကြောင့် အာသာဖြေဖျောက်ကြတာ။ (၃) မလုံလောက်တာ အသက်ကြီးလို့အထီးကျန်သူတွေ၊အိမ်ထောင်သည်တစ်ချို့....တွေဟာ မိမိဆက်ဆံဖော်နဲ့ဆက်ဆံရတာ တောင် စိတ်ထဲမှာ အာသာမပြေတဲ့အတွက် တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေကြလေ့ရှိတယ်။အဲဒါကို ပိုကြိုက်တာ လည်းပါမယ်။ ယောက်ျားလေးအယောက်တစ်ရာမှာ ၉၉ယောက်က အာသာဖြေလေ့ရှိပါတယ်။ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ ၀န်မခံချင်တာ၊ရှက်တာ၊ဘာသာရေးအဆုံးအမကြောင့်လွှဲရှောင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 12:51 PM No comments:
လူတွေဟာ နှာခေါင်းသွေးလျှံတာနဲ့ အမြန်ဆုံး သွေးတိတ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ သွေးလျှံတဲ့အကြောင်းရင်းတွေသိအောင် လုပ်ဖို့လို တယ်။ သွေးလျှံတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေသိအောင်လုပ်တာကနောက်၊ သွေးတိတ်အောင်လုပ်ရမှာက အရင်ပါ။
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းကတော့ သွေးလျှံသူဟာ အရှေ့ဘက်ကိုကိုင်းပြီး ထိုင်ရက်သားမလှုပ်ဘဲ နှာခေါင်းပေါက်ကို ပိတ်ထားရမယ်။ ပါးစပ်ဟပြီး (၁၀)မိနစ်ခန့် အသက်ရှူရမယ်။အဲဒီ(၁၀)မိနစ်အတွင်းမှာ နှာခေါင်းကို ဖွင့်လိုက်၊ ပိတ်လိုက်မလုပ်ဘဲ ဆက်တိုက်နှာခေါင်းပိတ်ထားဖို့လိုတယ်။နဖူးပေါ်မှာလည်း ရေခဲအိပ်ကလေး အုံကပ်ပေးထားရမယ်။ နှာခေါင်းပိတ်ထားတဲ့ အတွက် သွေးထွက်လာရင် အနောက်ကိုစီးဆင်းပြီး ပါးစပ်ပေါက်က ထွက်ကျလာမှာဖြစ်လို့ မိမိရဲ့သွေးပမာဏ ဘယ်လောက်ကုန်ဆုံးသွားပြီလဲဆိုတာ သိနိုင်တယ်။(ပါးစပ်ကနေ အပြင်ကိုထွက်ကျလာတဲ့ သွေးပမာဏကိုပြောတာပါ။) (၁၀)မိနစ်လောက် နှာခေါင်းပိတ်ထားလို့ သွေးထွက်စရာမရှိရင် သွေးပြန်ရပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ပထမ(၁၀) မိနစ်ကတည်းက သွေးမတိတ်ရင်တော့ ဆရာဝန်ထံသွားသင့်နေပါပြီ။ ဆေးရုံဆေးပေးခန်းဝေးတဲ့ အရပ်နဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ (၁၀)မိနစ်ခန့် (၃)ကြိမ်ဆက်တိုက်လုပ်လို့မှ မသက်သာရင်တော့ တက်ထရာဆိုက်ကလင်း(မျက်စဉ်းဆေးကရင်မ်)ကို ဂွမ်းမှသုတ်ပြီး နှာခေါင်းပေါက်ရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ သုတ်လိမ်းပေး၍ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် အထက်ကအတိုင်း ထပ်လုပ်ပါ။သွေးတိုးလို့ နှာခေါင်းသွေးလျှံတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊သွေးမတိတ်ရောဂါတစ်ခုခုရှိလို့ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားအကြောင်းအရာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါစေ သာမန်ထက်ပိုနေတယ်ဆိုရင် သွေးမတိတ်ဖူးဆိုရင် ဆေးခန်း၊ဆေးရုံကိုသာသွားပါ။ကျွန်တော်က ဆေးခန်း မရောက်ခင် သွေးထွက်နည်းအောင် တိတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြလိုက်တာပါ။
Posted by Alex Aung at 1:54 PM No comments:
မကြာခင်မှာ နွေရောက်တော့မယ်။ ကျောင်းတွေလည်းပိတ်တော့မယ်၊ ခွဲခွာရမယ့်သူတွေ လွမ်းကြရတော့မယ်။ဒီနွေမှာ ကတိစကားဆိုဖူးကြမယ်။ဥသြငှက်ရဲ့ အသံကို စာဖွဲ့ကြမယ်။ ပူပြင်းတဲ့နွေလတွေကို အထီးကျန်စွာဖြတ်သန်းရတဲ့သူ တွေလည်းရှိမယ်။ နွေကိုမကုန်ဆုံးစေချင်တဲ့ ပျော်ရွှင်သူလူသားတွေလည်းရှိမယ်။ ဒီလိုခံစားမှုတွေအကြောင်းကို ကဗျာတွေ စာတွေနဲ့ အမျိုးစုံတင်စားဖွဲ့နွဲ့ကြတယ်။ များပြားစွာရှိနေတဲ့ နွေခံစားမှုတွေ အနက်က သီချင်းတွေက ပြောတဲ့ နွေရဲ့အကြောင်းကို အခုတစ်လောခံစားမိနေတယ်။ အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ သီချင်းလေးကို ဝေမျှလိုက်မယ်နော်။
တေးရေး/တေးဆို - ဟန်ထူးလွင်
~မနက်ခင်း အလင်းထဲ တစ်ယောက်တည်းထိုင်ရင်း
မင်းလည်း ဘယ်ကိုရောက်နေ နွေဦး သစ်ရွက်ကြွေနဲ့ စိတ်ကူး
~မနေ့ကလိုဘဲ ဒီအတိတ်ဟာ ပူလောင်ဆဲ
မနေ့ကလိုဘဲ ငါလွမ်းတယ် မနှစ်ကလိုဘဲ ငါလွမ်းတယ်
ငါမျက်စိမှိတ်ထားတယ် မင်းလည်း တဒင်္ဂလေးပဲ
ငါရူးသွားလိမ့်မယ် ငါရူးသွားလိမ့်မယ် နွေဦး
မှုန်ဝါးနေ မှုန်ဝါးနေ မှုန်ဝါးလို့ ပျောက်ကွယ်။
သီချင်းလေးတွေနားထောင်ရင်း နွေဦးရာသီမှာ ဘာကို ဘယ်ကိုလွမ်းနေမှန်းမသိပါဘူးဗျာ။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း အဲဒီသီချင်းလေးနားထောင်ရင်း လွမ်းမောကြည့်ကြပါဦး။
Posted by Alex Aung at 1:06 PM No comments:
ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားတွေ ရေမွှေးသုံးတဲ့အခါသတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ချို့ကိုဝေမျှချင် ပါတယ်။
-သန့်စင်တဲ့ အနံ့မျိုးကို သုံးတဲ့အခါ ပိုပြီးဖျော့တဲ့အနံ့ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ မိန်းမ တွေဟာ ယောက်ျားတွေထက်အနံ့ခံအာရုံ ပိုပြီးအားကောင်းတယ် ပိုပြီးအာရုံစူးရှတယ်ဆို တာကိုသိထားပါ။အမျိုးသမီးတွေနဲ့ နီးစပ်အောင်ကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုအနံ့နဲ့ မူးမေ့သွားအောင်မလုပ်ပါနဲ့။အရင်တုန်းက အနောက်တိုင်းမှာ နွားအုပ်ကြီးတွေကို ကျောင်းတဲ့၊နွားကျောင်းသားတွေဟာ တိရိစ္ဆာန်အနံ့၊ချွေးနံ့တွေပျောက်အောင် ကြာပန်း တွေပေါက်တဲ့ရေကန်တွေထဲမှာ ရေချိုးတဲ့အတွက် ကြာနံ့သင်းသင်းလေးက အနံ့ဆိုးတွေ ကိုလက်တွေ့ပျောက်ကင်းသွားစေပါတယ်။
-နှုတ်ခမ်းမွှေး၊မုတ်ဆိတ်မွှေးရိတ်ပြီးတဲ့အခါ အရက်ပြန်ပါတဲ့ရေမွှေးနဲ့ လိ်မ်းပါ။ အရက်ပြန် ဟာချက်ချင်း သွေ့ခြောက်စေတဲ့အတွက် သာမန်ရေမွှေးမျိုးထက်အဆင်ပြေပါတယ်။
-အပူရှိန်ဟာ အနံ့အသက်ကို ပိုပြီးစူးရှပြင်းထန်စေပါတယ်။နွေရာသီဆိုရင် အနံ့ဖျော့တာ ကို အသုံးပြုပါ။အနံ့ပြင်းတဲ့ရေမွှေးမျိုးကို မသုံးပါနဲ့။အနံ့ပြင်းတဲ့ အသုံးအဆောင်မျိုးကို ဆောင်းရာသီအတွက်ဆောင်းထားပါ။ညနေခင်းများမှာသာ အနံ့ပြင်းတာကို အသုံးပြုဖို့ ကောင်းပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အနံ့ခံအာရုံဟာ မနက်စောစောပိုင်းအိပ်ယာထချိန်မျိုးမှာ ပိုပြီးအာရုံခံ ကောင်းပါတယ်။ အ၀တ်အစားဝတ်တဲ့အချိန်မှာ ဂရုစိုက်ပြီးရေမွှေးကိုရွေးဆွတ်ပါ။ မုတ်ဆိတ် ရိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း မိမိအနံ့မကြိုက်တဲ့ ရေမွှေးမျိုးကို အသုံးမပြုဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မိမိလည်းအနံ့ ခံမရ၊မိမိလည်းမကြိုက်တဲ့ အနံ့မျိုးကို မိမိသွား လာနေထိုင်၊လုပ်ကိုမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကြိုက်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ -ရေချိုးခန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ရေမွှေးမျိုးဟာ အလွန်အနံ့ပြင်းပါတယ်။အချိန်အတန်ကြာအောင် လည်းအနံ့စွဲနေတတ်တယ်။အဲဒီအမျိုးအစားရေမွှေးကို သုံးရင်ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားပြီးသတိထားသုံးပါ။ကြိုက်လို့သုံးရင်လည်း လက်ကောက်ဝတ်၊လည်ပင်းနဲ့ တံတောင် ဆစ်တွေမှာ နည်းနည်းလေးပဲဆွတ်ပါ။များများဆွတ်မယ်ဆိုရင် ခြေထောက်ကိုစပြီးဆွတ်ပါ။ ဒါမှ အနံ့ဟာ အပေါ်ကိုတက်လာပါလိမ့်မယ်။
-ရေမွှေးကို များများဆွတ်မိလို့စိတ်ညစ်မသွားပါနဲ့။ရေမွှေးမှာ သွေ့ခြောက်မြန်စေတဲ့ အရက် ပြန်ပါပါတယ်။ဒါကြောင့် နာရီပိုင်းအတွင်းခြောက်သွားပြီး အနံ့စူးရှလွန်းတာလည်း ဖျော့ သွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်ရော၊အမျိုးသမီးတွေကျေနပ်နှစ်ခြိုက်ဖို့အတွက်ရော၊ မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးကြည်လင်လန်းဆန်းနေဖို့ အတွက်ရော မွှေးကြိုင်နေရပါမယ်။ အမွှေးနံ့ ဟာ စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေတာလည်းအမှန်ပါပဲ။ အဲဒီလို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ စူးရှလွန်းတဲ့ရေမွှေးမျိုး အထူးသဖြင့် ကတိုးဆီကို အလွန်အကဲ သုံးထားတဲ့ အမွှေးနံ့မျိုးကိုမသုံးကြဘဲ ခေတ်နဲ့အညီ လူကြိုက်များတဲ့ သင်းပျံ့တဲ့အမွှေးနံ့ မျိုးကိုသာ အသုံးပြုသင့်တယ်။
-ပန်းရောင်ကိုရွေးသူ ဂန္တ၀င်တေးဂီတတွေကို နှစ်သက်တတ်တယ်။ပန်းရနံ့တွေကိုမြတ်နိုးမယ်။ အများအားဖြင့် တော့မိန်းကလေးတွေက ပန်းရောင်ကိုနှစ်သက်ကြတာပါ။
-အစိမ်းရောင်ကိုရွေးသူက သဘာဝတရားကိုမြတ်နိုးတယ်။R&Bတေးဂီတကိုကြိုက်ကြတယ်။သဘာဝရေကန်တွေနဲ့နီးတဲ့ အပန်းဖြေဏရာနေရာတွေကို နှစ်သက်တယ်။သစ်ပင်သစ်တောကို သဘောကျတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
-အ၀ါရောင်ကိုကြိုက်သူက ရော့အင်ရိုးလ်တေးဂီတတို့၊Spaမှာရေစိမ်တာတို့ကိုနှစ်သက်တတ်တယ်။သူတို့က နေ့ခင်းနေ့ လည်မှာကိုပဲ ရေမွှေးသုံးတတ်ကြတယ်။ပြီးတော့ အသီးအနှံတွေကိုနှစ်သက်တတ်ကြတယ်။
-ပင်လယ်ပြာလိုအရောင်ကိုရွေးသူဆိုရင် ကမ်းခြေမှာ နေစာလှုံမယ်၊ဆူရှီစားမယ်၊သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေရဲ့ရသမျိုး ကို သဘောတွေ့သူဖြစ်တယ်။
- အနီရောင်ကြိုက်သူက အစားအစာစားရင်လည်း စူးစူးရဲရဲ၊အလုပ်လုပ်ရင်လည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်၊စိတ်အားလည်း ထက်သန်တတ်သူ၊သွက်သွက် ထက်ထက်ဆိုကြပါစို့။
- ခရမ်းရောင် ရွေးချယ်တတ်ရင်Jazzဂီတကိုနှစ်သက်မယ်၊အရှေ့တိုင်းရသတွေကို သဘောကျချင်ကျနေမယ်။ဆွဲဆောင်အား ကောင်းတဲ့ အလှပိုင်ရှင်ဖြစ်မှာလည်း သေချာတယ်။
-ပြတင်းပေါက်အနီးနေရောင်ဝင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ ရေမွှေးပုလင်းမထားသင့်တဲ့အကြောင်း က နေရောင်ထိုးရင် ရေမွှေးထဲမှာရှိတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေက သူ့သဘောသဘာဝပြယ်တတ်တာ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
- လည်ကုပ်၊လက်မောင်း၊ ရင်ညွန့်၊နားရွက်နောက်ပိုင်း၊ဒူးအနီးတစ်ဝိုက် စတာတွေဟာ ရေမွှေးဆွတ်ဖို့ သင့်လျော်တဲ့နေရာတွေပါ။ ရေမွှေးတည့်မတည့် စမ်းကြည့်
- လက်မောင်း၊လက်ဖျံ စတဲ့နေရာတွေမှာ ရေမွှေးပမာဏနည်းနည်းလေးဆွတ်ကြည့်ပြီး တစ်နာရီလောက် အကြာအထိဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိသလဲစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်နဲ့တည့်တဲ့ရေမွှေးပါပဲ။
-စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးလည်း တစ်ကြိမ်မှာ သုံးလေးမျိုးထက်ပိုပြီး ရေမွှေး အမျိုးအစားအများကြီး စမ်းတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
Posted by Alex Aung at 12:45 PM No comments:
ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်လေ Magazineတွေဖတ်တဲ့အခါ ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ဂရုတစိုက်ဖတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဘယ်မေးခွန်းကိုဘယ်လိုဖြေတယ်၊သူတို့ဘာတွေဖြေကြတယ်ဆိုတာကို သိရသလိုသူတို့ စရိုက် ဓလေ့ စတာတွေကို သူတို့အဖြေတွေကတစ်ဆင့် သိရပါတယ်။ နောက်ပြီးသူတို့ ငယ်စဉ်က အတွေးတွေ ကိုသိရသလို သူတို့ ကျိုးစားလေ့လာပုံတွေကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့စကားလေးတွေကို စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့မှတ်သားလေ့ရှိပါ တယ်။အဲဒီထဲကမှ နည်းနည်းလောက်ကို သူငယ်ချင်းတို့ကိုပြောပြမယ်ဖတ်ကြည့်နော်။
“ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့လူနဲ့ တွေ့ရင်လက်တွန့်တာပဲ၊ ဒါမဆန်းပါဘူး။ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့လူလည်း ရှိမယ်၊ ကိုယ့်ထက်နိမ့်တဲ့လူလည်းရှိမယ်။ကိုယ့်ထက်သာတဲ့လူရှိလို့ မတီးတော့ရင် ကိုယ်ပဲမတိုးတက်မှာ၊ကိုယ့်ထက်နိမ့် တဲ့လူကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်အားရပြီးမလေ့ကျင့်ဘဲနေရင်လည်း ကိုယ်ပဲမတိုးတက်မှာဘဲ၊ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဂီတာတီးခဲ့တာ ကိုယ်တီးချင်လို့တီးခဲ့တာ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှကြည့်ပြီးမတီးဘဲနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး ဒါဘဲ”
(ပေါ်ဦးသစ် - ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သော လေးဖြူ စာအုပ်မှ)
ကိုယ်ဝါသနာပါပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကြတဲ့ လူငယ်တိုင်းအတွက် အောင်မြင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက်
“အဓိက ကတော့ စိတ်ဆန္ဒပေါ့။ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရယ်၊အဲဒီစိတ်ဆန္ဒနောက်ကို လိုက်လုပ်နိုင်မယ့် စိတ်ခွန်အား၊ လူ့ခွန်အား ပြီးတော့ တော်ရုံနဲ့မဖြစ်တဲ့အခါမှာ နောက်မဆုတ်တဲ့ ဇွဲသတ္တိမျိုးပေါ့။ အဲဒါမျိုးတွေ အခြေခံလိုအပ်ပါတယ်။”
Sai Sai Khan Hlaing
(Emperor Magazine – Feb 2005 Page 20)
လူငယ်တစ်ယောက် အောင်မြင်ဖို့၊အောင်မြင်မှုကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့
“အသိ၊အတွေ့အကြုံများတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပါ။ သူတို့တွေပြောတဲ့စကားကို နားထောင်ပါ။ မယုံပါနဲ့ဦး၊ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ယူသင့်တယ်ဆိုရင်ယူ၊ယူပြီးရင်လုပ်၊လုပ်ပြီးရင် အဲဒီလူနဲ့တစ်ခါပြန်တိုင်ပင်။ ကျွန်တော်တော့ လုပ်နေပြီ ဖြစ်သလား၊မဖြစ်ဘူးလား။မဖြစ်သေးရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ကျွန်တော် တိုးတက်စေချင်တယ်ဗျာ။ တိုးတက်တယ်ဆိုတာ ဘတ်စ်ကားတိုးတက်တာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်၊ အသိ၊ အသိဥာဏ်ကို တိုးတက်စေချင် တာ”
(Emperor Magazine – Feb 2005 Page 26)
“အရေးကြီးတဲ့ အရာတိုင်းကို ထောင့်စေ့အောင် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးမှလုပ်ပါ။ ဘ၀ဆိုတာ ကက်ဆက်ခွေတစ်ခုလို နောက်ပြန်လှည့်လို့မရဘူး။”
Myint Moe Aung (တေးရေး)
ကဲသူငယ်ချင်းတို့ မှတ်သားထားတဲ့ စကားလေးတွေကိုလည်း ဝေမျှပါဦးနော်။
Posted by Alex Aung at 1:15 PM No comments:
လူတစ်ယောက်....လူတစ်ယောက် နေ့စဉ်သေဆုံးနေသလို နေ့စဉ်မွေးဖွားနေတဲ့လူ့လောကမှာ ပြည့်စုံစွာနဲ့ မွေးဖွားလာ သူတွေရှိသလို လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မွေးဖွားလာသူလည်းအများသားပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ လိုက်ရတဲ့ မာသာထရီးဇာ ရဲ့ပြောစကားကတော့မှတ်သားစရာပါ။ဥပမာ- လမစေ့ဘဲမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကို မေတ္တာ အပြည့်နဲ့ ထွေးထွေးပိုက်ပိုက်ပြုစုခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သန်မှုနှုန်ပိုများပြီး၊သာမန်ပြုစုလျှင်တော့ အသက်ရှင်နှုန်း နည်းတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။မာသာထရီးဇာရဲ့ပြောစကားလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်..။
မေတ္တာထားခြင်း ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်း ကင်းမဲ့တာ၊
မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံးခြင်း ဝေဒနာတွေကိုတော့
Posted by Alex Aung at 12:40 PM No comments:
ငါးကြင်း(သို့)ငါးတန်(သို့)ငါးပါးနီ ရရာ တစ်မျိုးမျိုး -၁၅ကျပ်သား
ငရုတ်သီးစိမ်း -၂တောင့်(တစ်တောင့်ကို အနီရောင်ထည့်ပါ)
ငါးပေါင်းပြုလုပ်ပုံငါးကြင်း(သို့မဟုတ်)ငါးတန်ကို အသားလွှာပြီး ဆား၊သံပရာရည်တို့ဖြင့်ဆုပ်နယ်ပြီး ၁၀မိနစ်ခန့် နှပ်ထားပါ။ ကြက်သွန်နီဥကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း အခွံသင်ပြီး အကွင်းလိုက်လှီးထားပါ။ ချင်းပါးပါးသေးသေး တစ်လွှာလှီး ထားပြီး ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်ထားပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်း နှစ်တောင့်ကိုလည်း အလယ်မှခွဲထားပါ။အစပ် ကြိုက်ပါက ပိုထည့်နိုင်ပါသည်။ကြွေရည်သုတ် ပန်းကန်တစ်ချပ်တွင် အသားလွှာထားသော ငါးအသားတုံး ကလေးများကို လှပစွာစီတည့်ပါ။ကြက်သွန်နီအကွင်းများ၊ချင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ငရုတ်သီးစိမ်းကလေးများကို ၀န်းရံရွေ့ထည့်ပါ။ထို့နောက် အပေါ်မှ စတီးဟင်းခပ်ဇွန်းဖြင့် ဆီတစ်ဇွန်းဆမ်းပါ။ ငါးပေါင်းရန် အဆင်သင့်ဖြစ် ပါပြီ။ နှစ်ဆင့်ပေါင်းအိုးတွင် အောက်အဆင့်တွင်ရေထည့်၊အပေါ်အဆင့်တွင် ငါးပေါင်းပန်းကန်ပြားအားထည့် ပြီး အဖုံးဖုံး မီးအရှိန်မှန်မှန်ဖြင့် ၂၅မိနစ်ခန့်ပေါင်းပါ။ အကယ်ရွေ့ နှစ်ဆင့်ပေါင်းအိုးမရှိပါကလည်း ဒန်အိုး တစ်လုံးတွင် ရေထည့်၊အုတ်ခဲတစ်လုံးကို ရေမြှုပ်အောင်ထည့်ပြီး အပေါ်မှပန်းကန်ပြားတင်ကာ အဖုံးဖုံးပြီး ပေါင်းနိုင်ပါတယ်။အချိန်ပြည့်ပါက အဖုံးဖွင့်ကြည့်ပြီး ကျက်ပြီဆိုပါက ပူပူနွေးနွေးပင် ပေါင်းသည့် ပန်းကန်ပြားဖြင့်ပင် ပွဲပြင်ရွေ့စားသုံးနိုင်ပါသည်။အဖုံးဖွင့်သည့်အခါ ရေငွေ့များ ငါးပေါင်းပန်းကန်တွင် မကျရောက်စေရန် သတိပြုရပါမည်။
ကြက်သွန်ဖြူ - ၁၀ဥ
ကြက်သွန်နီ - ၂ဥ
ငါးများကိုအနေတော် အတုံးကလေးများတုံးပြီး တစ်ဖက်ကို မွှန်းရာတစ်ချက်ဆီပေး၊ရေဆူအောင်တည်ပြီး ငါးများကိုပြုတ်ပါ။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာအောင်ပြုတ်ပါ။ တစ်ဖက်ဆီကိုလည်း လှန်ပေးပါ။ အတုံးမပျက် ဆယ်ယူ ပါ။ထို့နောက် ငါးအသားတုံးများကို ဆားသင့်ရုံဖြူးပြီး အသင့်ချက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်ဖြင့်နှံ့ အောင်လူးပေးပါ။ ကြက်သွန်နီနှင့် ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ကို ပါးပါးလှီးပြီး သံပရာရည်၊ ပဲငံပြာရည်တို့ဖြင့် အချဉ်ပြု လုပ်ကာ ငါးတုံးများပေါ်တွင် လှလှပပ အုပ်ပေးပြီး ပွဲပြင်ပါ။ နံနံပင်ကိုလည်း အပေါ်မှအုပ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပူပူနွေးနွေး စားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါးပြုတ်ထားသော အရည်တွင် ဟင်းရွက်စိမ်းတစ်မျိုးမျိုးခတ် ပြီး ဟင်းချိုရည် အဖြစ်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ငါးပြုတ်လက်သုပ်အတွက် ငါးမှာ အထူးလတ်ဆတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
Posted by Alex Aung at 12:43 PM No comments:
မနေ့က တနင်္ဂနွေဆိုတော့ အလုပ်အားရက်ပေါ့။သူငယ်ချင်းကအဆောင်ကိုလာလည်ပါတယ်။ သူက ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးသူက ကျွန်တော့်အိပ်ယာဘေးက ဘာသာရေးစာအုပ်တစ်ချို့ကိုတွေ့သွားပြီး ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းတစ်ချို့မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းသိသလောက်သာဖြေနိုင်တာပေါ့။ကျွန်တော်က အခုမှ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာအဆင့်မှာပဲရှိသေးတာကိုး။သူပြန်သွားတော့ ကျွန်တော်တော်တော်ရှက်မိပါ တယ် သေသေချာချာမဖြေလိုက်နိုင်ဘူးကိုး။ ညကျတော့ အဆောင်ပိုင်ရှင် ဦးလေးနဲ့ တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်၊ မေးမြန်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိလိုက်သမျှကို သူငယ်ချင်းတွေ အခြားသူတွေလည်း သိစေလိုတဲ့ သဘောနဲ့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာလဲ?
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့သဘောတရားကတော့ လောကကြီးငြိမ်းချမ်းသာဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကိုယ် တယ်။တစ်နည်းဆိုရသော် ဒုက္ခကင်းဝေးချမ်းသာဖို့အရေးအတွက် ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေကြတာကတော့ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟတွေ လွန်ကဲနေကြတဲ့အတွက် ဆင်းရဲ ဒုက္ခခံစားကြ ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် လောဘနည်းရေး၊ဒေါသနည်းရေး၊မောဟနည်းရေးအတွက် သဘာဝနိယာမကို အခြေခံသော ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်ကို နှစ်သက်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ပါတယ်။
ရှိခိုးခြင်းဆိုတာပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှိခိုးပူဇော်ရခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းဟူသော သဒ္ဓါပေါ်မူတည်တယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားတည်းဟူသောရတနာ၊တရားတည်းဟူသောရတနာ၊သံဃာတည်းဟူသောရတနာများမှ တစ်ပါးကိုးကွယ်ရာမရှိဟု မမှိတ်မသုန်ယုံကြည်ပြီး ပူဇော်ကန်တော့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆို သည်မှာ ရတနာမြတ်သုံးပါးကို ယုံကြည်သူများကိုသာဆိုလိုသည်။
လောဘနည်းရေး၊ မောဟနည်းရေး၊ဒေါသနည်းရေး ကျင့်သုံးမှသာလျှင် သတ်တ၀ါတိုင်းသတ်တ၀ါတိုင်း ငြိမ်းအေးချမ်းသာမည်မှာ သဘာတရားဖြစ်သည်။ ယင်းသဘာဝတရားကို ဖော်ထုတ်လမ်းညွန်မှုပြုသူမှာ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သံသရာကြီးရဲ့ ဒုက္ခကင်းဝေးလွတ်မြောက်စေပြီး အမြိုက်တရား နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကို လူ၊နတ်၊ဗြဟ္မာ သတ်တ၀ါတိုင်းအား ကယ်မလမ်းညွန်ပေးနိုင်သော ကျေးဇူးရှင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၃) ဈေးရောင်းနေရင်း ပုတီးစိပ်တယ်၊ဈေးစကားပြောတယ် ဈေးရောင်းတယ် ဒါဟာ?မနက်ကတော့ မေတ္တာ
ပို့အမျှအတန်းဝေတယ်၊ ညနေကျတော့ အိမ်ကကြက်ကို သတ်စားတယ်၊ ဒါဟာဘာလည်း?
မေတ္တာ ပို့အမျှဝေတယ်ဆိုတာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဖြစ်တယ်၊အိမ်က ကြက်ကိုသတ်စားတာက အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားက ကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တာကို ဘုရားကလက်ခံပြီး၊ အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တာကို ဘုရားက ပစ်ပယ်ပါတယ်။သို့သော် ဘုရားက မည်သူ့ကိုမျှ လုပ်ရ၊မလုပ်ရဟု အတင်းအကြပ် ခိုးစေခြင်းမရှိပါ။ ပြုသူကောင်းမှုလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးခံစားရမည်ဖြစ်ပြီး၊မကောင်းမှုလုပ်ရင် မကောင်းကျိုးကိုခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုသည်မှာ သီလ၊သမာဓိကိုဆိုလိုသည်။ သီလဆိုသည်မှာ ကာယကံ၊၀စီကံ ထိမ်းခြင်းဖြစ် သည်။ သမာဓိဆိုသည်မှာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ဈေးသည်သည် စိတ်ပုတီးစိတ်၊မေတ္တာဝေ နေခြင်းသည် မေတ္တာ ဘာဝနာပွားများနေသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သော်လည်း သူရောင်းတဲ့ဈေးသည် သမာ အာဇီဝကျမကျ သိရှိဖို့ခဲယဉ်းသည်။မေတ္တာ ဘာဝနာပွားများပြီး သမာအာဇီဝကျသောရောင်းဝယ်မှုဖြစ်လျှင် မြင့်မြတ်သောကိုယ်ကျင့်ပြည့်စုံသူ သမာဓိရှိသူပြောရပါမယ်။ သမာအာဇီဝမကျရောင်းဝယ်သူဖြစ်လျှင်မူ သီလသမာဓိမရှိသူဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။
ကုသိုလ်၊အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးပြုလုပ်နေသူဟုသာ မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှု ဓမ္မနိယာမ အရ ကုသိုလ်ပြုလျှင် ကုသိုလ်အကျိုးခံစားရမည်၊အကုသိုလ်ပြုလျှင် အကုသိုလ်အကျိုးခံစားရမည်မှာ သဘာဝနိယာမမှာ အခြေခံသောဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နှင့်အညီ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
(၄)အပြစ်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ အပြစ်ပြုခံရသူကို ရှိခိုးကန်တော့လိုက်ရင် အပြစ်ဟာ ကြေပျက်သွား ရောလား?
အကုသိုလ်ကံ၊ကုသိုလ်ကံဟာ အာနိသင်ချန်ပြီး ပျောက်ပြယ်သွားဒါမှမဟုတ်အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအာနိသင်ဟာ
- ဒီဘ၀မှာပြုတဲ့အကုသိုလ်၊ကုသိုလ်ဟာ ဒီဘ၀မှာပဲ အကျိုးပေးတာ၊အဟောသိကံဖြစ်သွားတာလည်း ရှိတယ်။
- နောက်ဘ၀မှာမှ အကုသိုလ်ကံ၊ကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးတာ၊အဟောသိကံဖြစ်သွားတာလည်း ရှိတယ်။
- သံသရာတစ်လျှောက်လုံး အာနိသင်ရှိနေတတ်တဲ့ အကုသိုလ်ကံ၊ကုသိုလ်ကံလည်းရှိတယ်။
အာနိသင်ပြုသူဟာ အာနိသင်အကျိုးကို နိဗ္ဗာန်မရခင်အထိခံရမည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။ ဒေ၀ဒတ်ဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို သွေးစိမ်းထွက်အောင်လုပ်တယ်။ဘုရားရှင်က အပြစ်မယူစိတ်မဆိုးသောလည်း ဒေ၀ဒတ်ဟာ မြေမြိုခံခဲ့ရတယ်။ ကာယကံရှင်က ခွင့်ပြုသော်လည်း ပြုလုပ်တဲ့ ကံကမပျောက်တဲ့အတွက် ပြုလုပ်သော အကုသိုလ်အကြောင်းတရားကြောင့် အကျိုးတရားကိုခံစားရမည်သာဖြစ်သည်။ပြီးတော့ အဲဒီဦးလေးကပြောပါသေးတယ်...ရှိခိုးကန်တော့တယ်ဆိုတာ နောက်ဒီလိုမပြုတော့ပါဘူးဟု ၀န်ခံကတိပြုရာရောက်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ၀န်ခံကတိထားရာရောက်ပါသတဲ့။
ထောပတ်သီးမှည့် - ၁လုံး
သံလွင်ဆီ - ၁ဇွန်း
ငှက်ပျောသီးမှည့် - ၁လုံး
ထောပတ်သီးမှည့်၊သံလွင်ဆီတစ်ဇွန်း၊လိမ်မော်ရည်နည်းနည်းနဲ့ ငှက်ပျောသီးမှည့်တို့ကို ရောသမအောင် နယ်ရပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါပါးစပ်နဲ့ မျက်လုံးတွေကိုချန်ပြီးလိမ်းပေးရပါမယ်။လိမ်းပြီး မိနစ်(၂၀)လောက် ကြာတဲ့ အခါ မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။၀င်းဝါချောမွတ်သွားတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ ပိုမိုချောမွေ့ခင်ရင် တော့ မျက်နှာပေါင်းတင်ဖို့ ရောမွှေထားတဲ့ ပစ်စည်းတွေထဲကို အပူပေးအရည်ဖျော်ထားတဲ့ ပျားဖယောင်း ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီ - တစ်ဇွန်း
ကြက်ဥ - အကာရည်
လိုအပ်ပစ်စည်းအားလုံးကို သမအောင်မွှေပြီးတဲ့အခါ ဆံနွယ်အနှံ့ကို ညင်သာစွာ လိမ်းကျံပြီးခေါင်းပေါင်း ထားရပါမယ်။တစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အခါ ခေါင်းပေါင်းကိုဖြေပြီး ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ ဆံပင်ကိုဆေးရပါမယ်။ ပြီးတဲ့အခါ သုံးနေကျရှန်ပူတစ်မျိုးနဲ့ လျှော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ လှပတောက်ပြောင်တဲ့ ကေသာကိုပိုင်ဆိုင် သွားပါပြီ။
တစ်ကိုယ်လုံး သို့မဟုတ် ဖြူချင်တဲ့ နေရာဖြူဖို့ ပေါင်းတင်စို့
မန်ကျည်းသီးမှည့် - အနည်းငယ်
နနွင်းမှုန့်စစ်စစ် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
အရင်ဆုံး မန်ကျည်းသီးမှည့်ကိုရေနဲ့ဖျော်ပြီး အဖတ်တွေကိုဖယ်ရပါမယ်။ ရလာတဲ့မန်းကျည်းရေပျစ်ပျစ်ကို နနွင်းမှုန့်သင့်ရုံထည့်ပြီး သမအောင်မွှေဖျော်ထားရပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါ အ၀တ်အစားအကြမ်းတစ်စုံဝတ်ပြီး လက်နဲ့ခြေတွေအနှံ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဖြူချင်တဲ့နေရာတွေကို လိမ်းရပါမယ်။လိမ်းပြီးတစ်နာရီခွဲလောက်ကြာ လို့ ရေချိုးပြီးတဲ့နောက် နဂိုထက်ဖြူဝင်းလာတဲ့ စိုပြည်လာတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားပတ်တဲ့အခါ၊လေပူတွေတိုက်ခံရဖန်များတဲ့အခါ အသားအရေခြောက်သွေ့သူတွေအနေနဲ့လည်း ဒီနည်းကိုသုံးရင် နာရီပိုင်းအတွင်း ပင်ကိုအသားအရေကို ပြန်ရရှိမှာသေချာပါတယ်။
သန့်ှရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ ခွက်တစ်လုံးထဲမှာ Orangeရည်သန့်သန့်စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းနဲ့ ဒိန်ချဉ်သန့်သန့် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းကိုရောထည့်ပြီးမွှေပါ။ပြီးရင် အဲဒီအရည်နဲ့မျက်နှာ၊လည်ပင်းနေရာ စတာတွေကိုလိမ်း ပေးပါ။၁၀မိနစ်၁၅မိနစ်နေမှ ရေဆေးပြီးဖယ်ရှားပါ။ရေနွေးနဲ့ဆေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒီအခါ အင်မတန်သန့်စင်ကြည်လင်တဲ့ မျက်နှာကလေးဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
သတိထားရမှာက - Orangeသီးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး ညှစ်ယူလို့ရတဲ့ Orangeရည်ထဲ ကဗီတာမင်စီဓာတ်က အချိန်ခဏကြာရင်ပျက်ပြယ်သွားတတ်တယ်နော်။
Posted by Alex Aung at 1:35 PM No comments:
အီသီယိုပီးယန်းလူမျိုး(Ethiopian)ဆိတ်ကျောင်းသမားလေးက စခဲ့တာပေါ့။ သူ့နာမည်ကို တစ်လုံးအဖျား ဆွတ်ခေါ်ရင် “အင်ဒီ”လို့ခေါ်ပါသတဲ့။
အရိပ်ကောင်းတဲ့ အပင်တစ်ပင်ပင်အောက်မှာ နားနေရင်း သူ့ဆိတ်တွေကို လွှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အပင်တွေထဲက အနီရောင်အသီးကလေးတွေ ဝေနေတတ်တဲ့ ဘယ်ရီ(Red Berries)ပင်တွေဟာ နောင်သူ့ အရွက်တွေ အသီးတွေနဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်တဲ့အခါ အတော်သဘာဝကျတဲ့ “Goatus Ethiopicus” ဆိုတဲ့ ရုက်ခဗေဒ အမည်ကိုတောင် ပေးခဲ့ရသတဲ့။
ပြန်စပြောရရင် အင်ဒီကျောင်းနေတဲ့ ဆိတ်တွေဟာ အပင်တွေလွတ်ရာ ကွင်းပြင်ဘက်ထွက်ပြီး အတော် တက်တက်ကြွကြွ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားနေတာမြင်ရပါလေရော။ ခါတိုင်းနဲ့ မတူအောင်ကို သွက်သွက် လက်လက်ဖြစ်နေကြတယ်။ အင်ဒီအံ့သြမိတာပေါ့။ တောရိုင်းanimals တစ်ကောင်ကောင်ကို တွေ့ပြီး ချောက်ချောက်ချားချား ဖြစ်ကုန်ကြတာလားဆိုတာတွေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်ထကြည့်အကဲခတ်တော့ ဆိတ် တွေဟာ အန်တရယ်တစ်ခုခုကြောင့် ဟုတ်ဟန်မတူဘဲ မြူးထူးပျော်ရွှင်နေတာမျိုး တွေ့နေရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ..အနီရောင် အသီးလေးတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေသလား၊ကိုယ်တိုင် လက်တစ်ဆုပ်စာ ဘယ်ရီသီးနီနီလေးတွေကို ၀ါးပြီးမျိုချကြည့်တယ်။ ဘယ်လောက်မှ မကြာခင် ထူးခြားတဲ့ အာရုံတစ်ခုကို သူခံစားမိလိုက်တယ်။ဒါတွေ ၀ါးမိစားမိတဲ့ဆိတ်တွေ ဘယ်တုန်းကနဲ့မှ မတူအောင်မြူးနေကြတာ ဒါကြောင့်ကိုး။
ဒီလု နောက်ခံဖြစ်ရပ်မျိုးနဲ့ ကော်ဖီဆိုတာပေါ်လာတာပါ။ ခရစ်နှစ်တော်တော် စောစောမှာပဲ ကော်ဖီဟာ အီသီယိုပီးယားက စတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တခြားအယူအဆတစ်ခုကလည်း အာရေဗျ(Arabia)နိုင်ငံမျိုး ကစတယ်လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို အာရေဗျလူမျိုးတွေဟာ ဒီကော်ဖီစေ့တွေကို သူတို့နိုင်ငံမှအပ ဘယ်နိုင်ငံကမှ မစိုက်မပျိုးနိုင်အောင်၊ဘယ်ကိုမှ မပျံ့နှံ့အောင် ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့ အကြောင်းရှိခဲ့လို့ပါပဲ။
သို့သော်လည်း ၁၆၉၀ပြည့်နှစ်ထဲမှာ ဒတ်ခ်ျတွေက ရုက်ခဗေဒဥယျာဉ်တွေအတွက် ပျိုးပင်အချို့ရရှိသွားကြ တယ်။တစ်ဆင့်တစ်ဆင့် ဂျာဗားမှာရော ဥရောပနိုင်ငံ ပြင်သစ်စတဲ့နိုင်ငံတွေဆီ ရောက်ကုန်ပါလေရော။ တောင်အမေရိကတိုက် အထိပျံ့နှံ့ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ မူရင်းနိုင်ငံတွေက ဘယ်လိုပဲကန့်သတ်ထိန်းချုပ်နေစေဦး တော့ လာဘ်မြင်တဲ့ ဘရာဇီး လူမျိုးသံတမန်တွေက တစ်ဆင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံအထိပေါက်ရောက်ပြီး ဘရာဇီး ကော်ဖီလုပ်ငန်းဆိုတာ မွေးဖွားလာတဲ့အထိပါပဲ။အမှုန့်ကြိတ် ပြင်ဆင်ထုပ်ပိုးရောင်းချကြပေါ့။ကနေ့မှာဖြင့် Indiaအနောက်ပိုင်း၊ဂျာဗား၊တောင်အမေရိကနဲ့ အာဖရိကမှာပါ စိုက်ပျိုးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေ လေပြီ။နိုင်ငံတကာ ရောင်းကုန် ထုတ်ကုန်အဖြစ် တွင်ကျယ်နေရာယူနေလေပြီ။
ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာစောင်ထဲက သိချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို ရေးပေးပါဦးမယ်။ ဆံပင်နက်အောင် အိမ်မှာပဲနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်း၊Indiaအနှိပ်ပညာမှ စိတ်ဝင် စားစရာ၊ ကော်ဖီ ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်သလည်းစသဖြင့်ပေါ့။
အရွက်လက်တစ်ဆုပ်စာကို ရေစင်စင်ဆေး၊ငရုတ်ဆုံနဲ့ထောင်းရတယ်၊ညက်အောင်ထောင်းပြီး စုယူ၊ပြီးတော့ ပန်းကန်တစ်ချပ် ခံပြီးအရေညှစ်ယူရပါတယ်။ ရေစက်လက် အရွက်ဆိုတော့ အရည်များများရပါတယ်။ အရည်နဲ့အရောင်က အစိမ်းရင့်ရင့်ပါ။အဲဒါရပြီဆိုတော့ အုန်းဆီစစ်စစ်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးတစ်ဝက် လောက်ရောထည့်။(အုန်းဆီမရလည်း ပဲဆီထည့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းဆီက မွှေးတယ်ပေါ့)။
ပြီးရင် သမအောင်မွှေပြီး ဆံပင်ကို အမြစ်ကစ လူးရတယ်။ သွားပွတ်တံလေးနဲ့ ဘီးဖြီးသလို လိမ်းလို့ရပါ တယ်။ဦးရေထဲ ၀င်အောင် ဖိရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ အရေပြားထဲလက်နဲ့ဖိရင် အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။ အဲဒီ အစိမ်းရင့်ကို လိမ်းလိုက်တဲ့အခါ ဆံပင်ဟာ စိမ်းမလာဘဲ မည်းသွားပါရော။
ပထမတစ်ပတ်တစ်ခါ ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်းလိမ်းတယ်။နောက်ပိုင်း တစ်ပတ်နှစ်ပတ်နေမှ လိမ်းမယ်။ မျက်ခုံးမွှေးနည်းလို့်ဆိုရင်လည်း သွားပွတ်တံလေးနဲ့ ဆွတ်ပြီးလိမ်းပေးပါ။ ဆံပင်ပါးနေတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီအရည်နဲ့ ပွတ်ပွတ်ပေးပါ။
နှိပ်နယ်ခြင်းဟာ Indiaနိုင်ငံရဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ ရောဂါကာကွယ်ခြင်းနဲ့ ဆေးကုသနည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။India နိုင်ငံသားအားလုံးနီးပါးနှိပ်နယ်ခြင်းအတတ်ကို တတ်မြောက်ကြ တယ်လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မွေးကင်းစအရွယ်ကစလို့ မိခင်က သူ့ရဲ့ရင်သွေးကို နှိပ်နယ်ပေးတဲ့ အလေ့ ရှိပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကလေးများကလည်း မိဘဘိုးဘွားများကို ပြန်လည်နှိပ်နယ်ပေးကြတဲ့ အလေ့အထမျိုးကို သားစဉ်မြေးဆက် ကျင့်သုံးလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Indiaနိုင်ငံမှာ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ကုစားကာကွယ်ဖို့အတွက် အာယုဗေဒကုထုံး(ayurveda)နဲ့ အူနာနီ ကုထုံး(unani)များကို အဓိက အားထားကြပါတယ်။အာယုဗေဒကုထုံးနဲ့ အူနာနီကုထုံးတွေမှာ ဆေးပေးပြီး ကုသတာအပြင် နှိပ်နယ်ခြင်းကိုလည်း ကုထုံးတစ်ရပ်အဖြစ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ နှိပ်နယ်ပေး ခြင်းက ရောဂါဝေဒနာများမဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို သွေးလည်ပတ်မှုအားကို ကောင်းစေပြီး စိတ်နဲ့ ရုပ်ခန်ဓာတို့ ဆက်သွယ်မှု ဟန်ချက်ကိုပါ သဟဇာတဖြစ်စေတယ်လို့ ယူဆထားပါတယ်။
နှိပ်နယ်ပေးခြင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာ ပြေလျော့အောင် ညင်သာစွာပွတ်သပ်နှိပ်နယ်ခြင်း၊ လန်းဆန်းတက်ကြွ အောင် ခပ်သွက်သွက်နှိပ်နယ်ခြင်း၊သွေးပူအောင် ပွတ်တိုက်ဖျစ်ညှစ်ခြင်းမျိုးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ခန်ဓာကိုယ် အနှံ့အပြားမှာ ရှိနေတဲ့ ဖိအားပေးပြီး ဖိနှိပ်ပေးရတဲ့ နှိပ်ကွက်များကို ဖိနှိပ်ပေးခြင်းမျိုးတွေကအစ ပါဝင်ပါတယ်။ နမူနာအနေနဲ့မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင် သတို့သားသတို့သမီးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးပုံအား ရေးပေး လိုက်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပွဲအတွက် နှိပ်နယ်နည်း(Indian Bridal Massage)
Indiaမှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ့် ၁၀ရက်အလိုလောက်ကစပြီး နေ့စဉ် သတို့သမီးနဲ့ သတို့သားတွေကိုနှိပ်နယ် ပေးတဲ့ ရိုးရာအလေ့အထ ရှိပါတယ်။ သတို့သမီးရဲ့ စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး အသားအရေကို တောက်ပ ၀င်းလဲ့စေကာ သတို့သားရဲ့ အားမာန်တက်ကြွမှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဆေးဖက်ဝင် အပင်များ၊ အမွှေးအကြိုင်များနဲ့ စံပယ်ပန်းကနေ ထုတ်နုတ်ယူထားတဲ့ မွှေးရနံ့ဆီများ ရောစပ်ပြီး ကြိတ်ထား တဲ့(ubtan)အပ်တန် အနှစ်ပျော့ပျော့များကို သတို့သမီး အားလိမ်းကျံပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်းကျံတဲ့ အခါ အရေပြားထဲစိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့အောင် ပွတ်သပ်ဆုတ်နယ်ပေးရ ပါတယ်။ အပ်တန်(ubtan) အနှစ်ပျော့တွေ ထဲက အရည်များ အရေပြားထဲ စိမ့်ဝင်သွားလို့ အနှစ်ပျော့ပျော့ခြောက်သွေ့သွားတဲ့အခါ အနှစ်ပျော့ပျော့ တွေကွာကျလာအောင် ဆက်ပြီး ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပေးရပါတယ်။ပြီးမှ ရိုးရိုးရေနဲ့ဖြစ်စေ၊ နှင်းရည်နဲ့ဖြစ်စေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ရေဖက်သုတ်ပြီး သန့်စင်ပါတယ်။ ဒီလို နှိပ်နယ်မှုခံယူအပြီးမှာတော့ အသားအရေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းကာ တောက်ပ၀င်းလဲ့လာပါလိမ့်မယ်။
အပ်တန်(Ubtan)ရောစပ်ပြုလုပ်နည်း (Ubtan blend)
ဂျုံမှုန့်ဇွန်းကြီး - ဇွန်းကြီး လေးဇွန်း(တစ်ကိုယ်လုံး လိမ်းကျံပေးရန်အတွက်)
နှမ်း(ကြိတ်ပြီးသား အမှုန့်) - ဇွန်းကြီး နှစ်ဇွန်း
နနွင်းမှုန့် - ဇွန်းကြီး တစ်ဇွန်း
ပဲနံ့သာစေ့ - ဇွန်းကြီး တစ်ဇွန်း
မုန်ညှင်းစေ့(ကြိတ်ပြီးသားအမှုန့်) - ဇွန်းကြီးတစ်ဇွန်း
နှမ်းစေ့ - ဇွန်းကြီး သုံးဇွန်း
မုန်ညှင်းဆီ - ဇွန်းကြီး တစ်ဇွန်း
နံ့သာဖြူ ရနံ့ဆီ -၅စက်အားလုံးကို မွတ်ညက်နေတဲ့ အနှစ်ပျော့ပျော့အဖြစ် ရရှိအောင် ရောစပ်ပေးပါ။
Posted by Alex Aung at 1:33 PM No comments:
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နားမကြားသူတွေအတွက်နေရာ တစ်နေရာရှိသည်။ အဲသည်နေရာက နားကြားသူတွေ နှင့် တစ်ပြေးညီသောအဆင့်လည်းဖြစ်၏။
ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ကို မသနားပါနဲ့၊ ဂရုတော့စိုက်ကြပါ။ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ကို ကျောင်းတွေမှာ၊အလုပ် ခွင်မှာ၊ဒါမှမဟုတ် ကစားတဲ့နေရာမှာ နားကြားသူတွေကို ဆက်ဆံသလို ဆက်ဆံပါ။ ပြီးတော့ ဟောသည် မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေကို စွန့်ပစ်လိုက်ကြပါ။
နားမကြားသူများသည် “နားမကြားသည့်အပြင် စကားလည်း မပြောတတ်ကြ” သို့မဟုတ် “နားမကြား သည့်အပြင် ဆွံ့လည်းဆွံ့အကြသည်”
နားမကြားသူ တစ်ယောက်သည်“နားမကြားသည့်အပြင် စကားလည်းမပြောတတ်” သို့မဟုတ် “နားမကြား သည့်အပြင် ဆွံ့လည်းဆွံ့အသေးသည်”ဟူသော အသုံးအနှုန်းက ရည်ညွှန်းသကဲ့သို့ အသိဥာဏ်မရှိဟူရွေ့ အဓိပ်ပါယ် မရပေ။ အီသည်မှာ အများဆုံးတွေ့နေရသည့်မှားယွင်းသော အယူအဆဖြစ်သည်။
နားမကြားသူများသည် စကားပီပီသသ မပြောနိုင်ပေ
နားမကြားသူများသည် မှန်ကန်သော အထောက်အကူပစ်စည်းများနှင့် သင့်လျော်သော ဆောင်ရွက်ချက် တွေဖြင့် စကားပြောနိုင်စွမ်းရှိလာနိုင်၏။ ပီပီသသလည်းပြောနိုင်၏။
သင်္ကေတ ဘာသာစကားသည် နိုင်ငံတကာ ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်
One Worldလုံး အသုံးပြုသည့် သင်္ကေတဘာသာစကား ဟူရွေ့မရှိပေ။နိုင်ငံအသီးသီးက မိမိ၏ ယဉ်ကျေးမှု ပေါ် အခြေခံလျက် သင်္ကေတ ဘာသာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြသည်။
နားမကြားသူများသည် ဆောင်ရွက်မှု စွမ်းရည် နိမ့်ကျသည်
နားမကြားသူတစ်ယောက်သည် နားကြားဖို့လိုအပ်သော လုပ်ငန်းမှအပ နားကြားသူတစ်ယောက် လုပ်နိုင် စွမ်းရှိသော အလုပ်ဟူသမျှကို လုပ်နိုင်သည်။
နားကြားရေး အထောက်အကူ ပစ်စည်းများသည် နားမကြားခြင်းကို အပြည့်အ၀ ကုသပေးနိုင်၏။
မမှန်ပါ။နားကြားရေး အထောက်အကူပစ်စည်းများ(နားကြပ်)သည် ပတ်ဝန်းကျင်မှ အသံတွေကိုသာ အကျယ်ချဲ့ပေးနိုင်ပေသည်။
နားမကြားသူများအား ကူညီရန်အတွက် စင်ကာပူ နားမကြားသူများအသင်းက ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် ပြုစုထားသည့်စားရင်းတစ်ခုရှိသည်။
-နားမကြားသူတစ်ယောက်နှင့် စကားပြောသောအခါ မျက်စိဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။
-သူအာရုံစိုက်လာစေဖို့ နားမကြားသူလက်မောင်းကို အသာပုတ်ပါ။
-မြန်မြန်မပြောပါနဲ့။ မပီမသ မပြောပါနဲ့။ အော်မပြောပါနဲ့။
-နားမကြားသူတစ်ယောက်နှင့် စကားပြောတဲ့အခါ သင့်မျက်နှာကို အုပ်မထားပါနှင့်။
-နားမကြားသူတစ်ယောက် အာရုံစိုက်လာအောင် သူ့အားစက်ကူတွေ သို့မဟုတ် အခြားပစ်စည်းတွေနှင့် မပေါက်ပါနှင့်။-နားကြားသူတွေကြားမှာရှိသော နားမကြားသူတစ်ယောက် အား လျစ်လျူမရှုပါနဲ့။
Posted by Alex Aung at 12:23 PM No comments:
စိတ်ရောဂါတွေအကြောင်း ဖတ်ဖြစ်လို့ ပြန်လည်ပြောပြချင်ပါတယ်။ စိတ်ရောဂါ လို့မခေါ်နိုင် တဲ့ စိတ်အခြေအနေလေးတွေကတော့ လူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ရောဂါလို့ဆိုရလောက် အောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ နည်းလမ်းတကျကုသသင့်သလို ရှက်နေကြောက်ရွံ့နေ စရာမလို ဘူးထင်ပါတယ်။ကဲပါလေ....Bipolar Disorder (ဘိုင်ပိုလာ ဒစ်စ်အော်ဒါ) ခေါ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ အကြောင်း ရေးပါမယ်။
ဘိုင်ပိုလာ ဒစ်စ်အော်ဒါ ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ
ဘိုင်ပိုလာ ဒစ်စ်အော်ဒါကို နောက်တစ်မျိုးပြောရရင်တော့ အကြီးအကျယ် စိတ် အတက်အကျ မြန်တာ တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်အနေအထားရော၊ စွမ်းအင်ရော၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေပါ အလွန်အမင်း ရွှေ့ပြောင်းတဲ့ရောဂါမျိုးပါ။ အဲဒီလို ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တဲ့အခါ တချို့က သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တချို့မှာတော့ လှုပ်လှုပ် ခတ်ခတ် ငိုငိုရယ်ရယ်နဲ့ လူသိသူသိကို ဖြစ်လေ့ရှိတာမျိုးပေါ့။ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးဖြစ်တာ မတူပါ ဘူး။ USမှာတော့ လူဆယ်သန်းလောက်မှာ ဒီရောဂါဖြစ်နေပြီး ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ ဖြစ်ပွားမှု ဆတူလောက်ပဲရှိသတဲ့။ဒီရောဂါက နာတာရှည်ရောဂါမျိုးပါ။ တချို့ဆိုရင် တစ်သက်လုံးဖြစ် သွားတတ်ပါတယ်။ ရောဂါရှင်များမှာတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အရူးထတာမျိုးနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာ မျိုး တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်တတ်ပြီး အဲဒါမျိုးက ရက်တွေ လတွေကြာတတ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နဲ့ လူကြီးပိုင်းဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ စဖြစ်လေ့ရှိတာလေ။ ကလေးတွေမှာတော့ ဖြစ်ခဲပါရဲ့။ ဝေဒနာရှင်အများစုကတော့ တစ်သက်တာလုံး ကုသမှုခံယူ သွားရတာပါပဲ။ဆေးတိုက်ကျွေးတာကတော့ အအောင်မြင်ဆုံး အချက်ပေါ့။ စိတ်ရောဂါကုထုံးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ပံ့ပိုးမှု၊ပညာပေးနိုင်မှုတွေကလည်း မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘိုင်ပိုလာရဲ့ တက်ကြွလွန်းတဲ့ လက်ခဏာများ
- အလွန်ပျော်ရွှင်မှု၊စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွမှု၊ စိတ်တိုမှု၊ ဒေါသထွက်မှုနဲ့ စိတ်မကြည်မသာ ဖြစ်မှုတွေ တစ်လှည့်စီဖြစ်နေခြင်း။
- ရုပ်စွမ်းအားနဲ့ ဥာဏ်စွမ်းအားတွေ တိုးမြင့်လာပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား တရားလွန်အောင် လုပ်ခြင်း။
-စကားအပြောများပြီး သာမန်ထက်စကားတွေ မြန်နေခြင်း
- ကြီးကျယ်လွန်းတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြောနေခြင်း
-မတွေးတော၊မဆင်ခြင်နိုင်ဘဲ ငွေသုံးမှု၊လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ အရက်သောက်မှုတွေ ဖြစ်နေခြင်း
-အိပ်ရေးနည်းလာပေမယ့် မောပန်းမှု မဖြစ်ခြင်း။
-စွမ်းအင်များ၊ လှုပ်ရှားမှုများ လျော့နည်းသွားခြင်း
-ဘာမှ အာရုံမစိုက်နိုင်၊ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ဖြစ်ခြင်း
-ပူပန်မှု၊စိတ်သောကရောက်မှု စတဲ့ ခံစားမှုတွေ လွန်ကဲလာခြင်း
-နှစ်သက်လေ့ရှိသောအားကစား(သို့မဟုတ်) အသင်းအဖွဲ့ကိတ်စတွေမှာ စိတ်မ၀င်စား တော့ခြင်း။
-အစာကို အလွန်စားခြင်း (သို့) လုံးဝမစားနိုင်ခြင်း
-အိပ်စက်မှု မူမမှန်ဖြစ်ခြင်း (အလွန်အိပ်ခြင်း (သို့) မအိပ်နိုင်ခြင်း)
ဘိုင်ပိုလာရဲ့ ရောဂါနှစ်မျိုးပေါင်းမှုဆိုတာ ဘာလဲ
တက်ကြွလွန်းတဲ့ လက်ခဏာများနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက်ခဏာနှစ်မျိုး တစ်ချိန်တည်းမှာ ဖြစ်ခြင်း၊ရောဂါလက်ခဏာနှစ်မျိုးပေါင်းချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေပေမယ့် အရူးအမူး ထလုပ်ချင် တာတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ပစ်တတ်ပါတယ်။
ရောဂါရဲ့ အလျင်အမြန် ဖြစ်ပွားလှည့်ပတ်မှုက ဘာလဲ
တစ်ခါတစ်လေ ဝေဒနာရှင်တစ်ချို့မှာ အဲဒီလို အစွန်းရောက်လက်ခဏာမျိုး(အလွန်စိတ်ဓာတ် ကျခြင်းနဲ့ အလွန်တက်ကြွပြီး လုပ်ချင်တာလုပ်ပစ်ခြင်း)က တစ်လှည့်စီဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်များ လှည့်ပတ်မှု မြန်လာပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး တစ်နှစ်မှာ လေးကြိမ်ထက် ပိုတဲ့အခါ “အလျင် အမြန်ဖြစ်ပွားလှည့်ပတ်မှု”လို့ခေါ်ကြတာလေ။မိန်းမတွေမှာ အဲဒီလို ပိုဖြစ်တတ်သတဲ့။
ဘိုင်ပိုလာ ဒစ်စ်အော်ဒါ ဖြစ်စေတဲ့ အချက်များ
အဓိက အကြောင်းအရင်း အချက်ကို မသိရသေးပေမယ့် ဆေးသိပ်ပံပညာရှင်များကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဓာတုပစ်စည်းတွေ မူမှန်မဖြစ်တော့ဘဲ ဦးနှောက်ရဲ့ တစ်နေရာရာကို ထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းလို့ဆိုကြပါတယ်။မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါမို့ မိသားစုထဲမှာ ဒီရောဂါတွေ မျိုးဆက်အလိုက် ဖြစ်နေရတာက မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာလို့လည်း ထောက်ပြခဲ့ ပါရဲ့။စိတ်ဖိအားများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်(သို့) အနုတ်လက်ခဏတွေနဲ့သာကြုံရတဲ့ ဘ၀မှာ နေထိုင် ရသူများမှာ မျိုးရိုးဗီဇ(သို့)ဇီဝဗေဒနည်းတွေနဲ့ ရောဂါကိုဖန်တီးခဲ့သတဲ့။ဘိုင်ပိုလာ ဒစ်စ်အော်ဒါ ဖြစ်ရတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါကို ကုသတဲ့အနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွတဲ့ ဆေးတွေ စားတဲ့အခါ ဆေးကြောင့်စိတ်တက်ကြွလွန်းသွားတာ၊ အအိပ်မမှန်လို့ ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်ပြီး တက်ကြွသွားတာ၊သိုင်းရွိုက်ဂလင်းက ဟော်မုန်းစစ်ထုတ်မှုနည်းလို့ စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ် တာတွေလည်း ဘိုင်ပိုလာ ဒစ်စ်အော်ဒါဖြစ်စေသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ စိတ်ကြွဆေး မသောက်၊အထက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေ အခြေမခံဘဲ ထဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နေတာပါပဲ။
ဘိုင်ပိုလာ ဒစ်စ်အော်ဒါကို လုံးဝ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသလို့မရပေမယ့် ငြိမ်သွားအောင်တော့ ကုသနိုင် သတဲ့ ။တိတိကျကျဆေးပေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးအဆင့်အထိတော့ နေကောင်းသွားကြတာပါ။ သင့်တော် တဲ့ ဆေးသောက်ရမှာကတော့ အဓိကကုသပေးနည်းပါပဲ။စိတ်ကုထုံးအမျိုးမျိုး၊မိသားစုကုထုံးနဲ့ ပံ့ပိုးမှုက လည်း အရေးကြီးပါတယ်။စိတ်ဖိအား မများဖို့ကတော့ အလွန်အရေးပါတဲ့ ကိတ်စပါ။
ဆေးတိုက်ကျွေးတဲ့ အခါ တက်ကြွလွန်းတဲ့ အတွက်ရော၊ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အတွက်ရော ဆေးနှစ်မျိုးတိုက် ကျွေးရမှာဖြစ်သလို စိတ်အတက်အကျမြန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အကြိမ်နည်းသွားအောင်လည်းကာကွယ်ပေးတဲ့ ဆေးတွေရှိနေပါတယ်။ဘယ်ဆေးမဆို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတာမို ဆေးတစ်မျိုးကို ဘယ်လောက်များ များစားရမလဲ။ဘယ်လောက်ကြာကြာ စားရမလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်များနဲ အမြဲတမ်းညိနှိုင်းသွားရမှာပါ။
ဘိုင်ပိုလာ ဒစ်စ်အော်ဒါဆိုတဲ့ စိတ်အတက်အကျ အလွန်မြန်ပြီး စိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့ရောဂါကို ဆယ်ကျော် သက်တွေမှာ အဖြစ်များတာမို့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ အရွယ်ပြောင်းချိန်မှာ မိဘများ အထူးဂရုစိုက်ရ မှာပါ။ မဟုတ်ရင် ရောဂါက အရိုးစွဲသွားတတ်ပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ (သို့) မိသားစု တစ်စုမှာ စိတ်ဝေဒနာ ရှင်ရှိနေပြီဆိုရင် တစ်အိမ်လုံး စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကြရတာမျိုးလေ။စိတ်ရောဂါအချို့ကလုံးဝပျောက် အောင် မကုသနိုင်ပေမယ့် ကြွမတက်အောင်တော့ ဆေးနဲ့ ထိန်းထားတာ၊ ကုထုံးတွေနဲ့ ထိန်းထား တာ၊ ကုထုံး တွေနဲ့ ထိန်းထားတာမျိုးတော့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 5:57 PM No comments:
ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အုတ်ကလင်မြို့ရှိ ကိုင်ဇာပါမင်နှင့် အဖွဲ့၏သုတေသနပြုချက် အရ တစ်ရက်လျှင် ကော်ဖီတစ်ခွက် သောက်လျှင်ပင် အရက်သမားမှာ အရက်ကြောင့် အသည်း ကျွမ်းမှုမှ ၂၀ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း။ခွက်များများသောက်လေ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ကြရသည်။
ကော်ဖီသည် အသည်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရွေ့ အရက်ကြောင့် ဆေးရုံတက်ရမှု၊ သေဆုံးမှု များမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ကြရသည်။မည်သည့်အတွက် ယင်းသို့ ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်သည်ကို ဆက်လက် သုတေသနပြုနေကြသည်ဆိုသည်။
မှတ်ချက် - သာမန်လူများတစ်နေ့ သုံးခွက်ကိုနွားနို့ရောရွေ့ သောက်သင့်ကြောင်း၊ ပိုသောက် လျှင် အန်တရယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိပ်ပံပညာရှင်များက ထောက်ခံပြီးဖြစ်သည်။
(၅) သံလွင်ဆီနှင့် ကင်ဆာ
မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှ လူများသည် သံလွင်ဆီကို အသုံးများကြရွေ့ နှလုံးသွေးကြော ရောဂါမှ ကင်းဝေးတတ်သည်ကို လူသိများပါသည်။၂၀၀၆ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့ သတင်းအရ ဒိန်းမတ်ပြည်မှ သိပ်ပံပညာရှင်များသည် အသက်၂၀မှ ၆၀အတွင်းမှ ကျန်းမာသူ၁၈၂ဦးကို နှစ်ပတ်မျှ အစားအစာတွင်းနှိုက် သံလွင်ဆီကျွေးရွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်ကြောင်းသိရသည်။ သံလွင်ဆီ ၂၈မီလီမီတာကို နေ့စဉ်ကျွေးပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရာ လူ့ခန်ဓာကိုယ်မှ ကလာပ်စည်း များကို ပျက်စီးစေ၊ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သော SOXODGခေါ် ဓာတ်များလျော့နည်းသွားသည် ကိုတွေ့ကြရသည် ဆိုသည်။
ဥရောပ မြောက်ပိုင်းတွင် သံလွင်ဆီစားသုံးမှုနည်းရွေ့ တောင်ပိုင်းတွင် စားသုံးမှုများသည်။ ထို့ကြောင့် မြောက်ပိုင်းတွင် ကင်ဆာအဖြစ်များရွေ့ တောင်ပိုင်းတွင် အဖြစ်နည်းရခြင်းဟု ကောက်ချက်ချကြသည်။
Posted by Alex Aung at 11:53 AM No comments:
ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာစောင်မဂဇင်းတွေမှာ ပါတဲ့ သတင်းအထွေထွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကိုယ်ထင်တယ်။ သိပြီးသားဆိုရင် လည်းအဲဒီသတင်းကို ပြန်နွေးတယ်လို့သဘောထားလို့ရတာပေါ့လေ။
တရုတ်တို့သည် ရူယံ(RUYAM)အမည်ရှိ တရုတ်ဆေးလိပ်ဖြတ် အတံကို တရုတ်ပြည်တွင် ရောင်းချရာ ဒေါ်လာ သန်း၁၂၅ပင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ရူယံ အဓိတ်ပါယ်မှာ “စီးကရက်နှင့် တူသည်”ဟုအဓိတ်ပါယ်ရပြီးဆေးတံအတွင် နစ်ကိုတင်ပါသော အလုံးငယ်များထည့် သောက် ရှူရသော အတံဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရာတွင် NRTခေါ် “နစ်ကိုတင် ရီပလေ့စ်မင့် သာရပီ” ဆေးလိပ်အစား နစ်ကိုတင်ကို ရှူစေပြီး ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်တွင် ရောင်းချနေသော်လည်း “ရူယံ”သည် ဆေးလိပ်ဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင် သည်ဟု worldကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ မထောက်ခံချေ။ အကြောင်းမူ ထိုအလုံးတစ်လုံးစီတွင် နစ်ကိုတင် ၁၈မီလီဂရမ်ပါပြီး စီးကရက်တစ်လိပ်ပါ နစ်ကိုတင် ၁.၂ မီလီဂရမ်ထက် များနေသောကြောင့် မထောက်ခံခြင်းဟုဆိုသည်။ ပါရဂူတို့ အဆိုအရ နစ်ကိုတင် အစားထိုး ဆေးလိပ်ဖြတ်ရာတွင် နစ်ကိုတင်ကို အကန့်အသတ်နှင့်နည်းနည်းစီ ထည့်ပြီးမှ ဖြတ်သင့်သည် ဆိုသည်။
(၂) ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါအတွက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေး နည်းလမ်းသစ် ရှာဖွေ တွေ့ရှိ
ဘရာဇီး သိပ်ပံပညာရှင်များက ကလေးများတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ အတွက် အကုန်အကျသက်သာပြီး အစွမ်းထက်သော စမ်းသပ်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို အောင်မြင်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း Wednesdayတွင် Istituto Oswaldo Cruz သုတေသန လုပ်ငန်းက ကြောညာခဲ့သည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေးငယ်၃၀၀၀၀၀ခန့်မှာ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ ကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆေးရုံတက် ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရလျှက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အထူး ကုဆရာဝန်ကြီးများက ကလေးငယ်များအား အရည်အသွေးပြည့်ဝသော သောက်ရေနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများကို ဂရုတစိုက် ကျွေးမွေးကြရန် မိဘများအား တိုက်တွန်းထားသည်။
လူနာ၏ ခန်ဓာကိုယ်မှ အရည်ကြည်တစ်စက်မျှကို ရယူပြီးနောက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရသော အဆိုပါ စမ်းသပ်မှုသည် စက်ကန့်သုံးဆယ်အတွင်း ရောဂါအခြေအနေကို သိရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါ စမ်းသပ်မှုအား Instituto Oswaldo Cruz သိပ်ပံသုတေသနလုပ်ငန်းမှ သုတေသန ပညာရှင် Wablemir de Castro Silveria ကတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါတွေ့ရှိမှု အတွက် ဘရာဇီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၄င်းအားဆုချီမြင့်ခဲ့သည်။ အချို့သော ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ တွင် ၂၄နာရီအတွင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ကုသရေးကိုပါ တစ်ပါတည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်နှင့် သြစတြေးလျမှ သုတေသီတို့သည် အနာအမြန်ပျောက်စေရန် အနာရှိရာသို့ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား သင့်စေကြသည်။ ဓာတ်အားကြောင့် ကလာပ်စည်းများ ပုံမှန်ပြန်ကောင်းမှု မြန်ဆန် စေသည် ဆိုသည်။ အရေခွံသည် လျှပ်စစ်ဘက်ထရီကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ကလာပ်စည်းများအတွင်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းစေသည်။ ဒဏ်ရာရလျှင် အရေခွံစုတ်ရွေ့ လျှပ်စစ်မစီးတော့။ အနာ ၁ဒသမ၂မီလီမိတာ ဝေးရာနှိုက် လျှပ်စစ်သင့်စေသော် အရေခွံတွင်း လျှပ်စစ်ပြန်စီးရွေ့ ကလာပ်စည်းများ လျင်မြန်စွာ ကျန်းမာစေသည်။
Posted by Alex Aung at 11:43 AM No comments:
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ တင်မြင့်ရဲ့ ၀တ်ထုထဲမှာပါတာလေးတွေ ရေးပြချင်ပါသေးတယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ ဇာတ်လိုက်က ဆေးဖြတ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ ဆေးရောင်းတဲ့အဖွဲ့က ဖြုန်းအား ကောင်းသူကို ဆေးမပြတ်စေချင်ဘူး။ဘယ်လို မြူဆွယ်တယ်။ ခြိမ်းခြောက်တယ် ဆိုတာတွေ မူးယစ်သံသရာတွေကို ပြောပြချင်လို့ပါ။
“ဆေးစွဲနေတဲ့လူတွေထဲမှာ မိဘမချောင်လည်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေက သားလိုမိဘချမ်းသာသူတွေကို ဆေးစွဲသွားအောင်လုပ်ပြီး..သူတို့အတွက်ပါ သားက ဆေး ဒကာခံရတာလေ။အဲဒီအကွက်ထဲ သားဝင်သွားတာပါ။ဒါကြောင့် ပဲခူးမှာ သားဆေးဖြတ်ရင် သူတို့က သားကိုပြန်ပြီး ဆေးပြန်စွဲအောင် လုပ်ကြမှာပဲ။ဒါကြောင့် ဒီကဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် က သားဆေးဖြတ်ရင် ပဲခူးမှာ မဖြတ်နဲ့တဲ့”
“မင်းဆေးမဖြတ်ရဘူး။ငါက အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ တားမြစ်တယ်”
“သိပ်ဆိုင်တာပေါ့၊ မင်းဟာ ငါတို့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ငါတို့အဖွဲ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအားလုံး မင်းသိနေပြီ။ဒီလိုအတွင်းသိ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဆေးဖြတ်တာဟာ တို့အဖွဲ့က ထွက်သွားရာရောက်တယ်၊အပြင်မှာ တောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့ သတင်းပေး သဘောဖြစ်သွားတယ်၊ဒါဟာ အဖွဲ့ကို သစ်စာဖောက်တာပဲ”
“မင်းကောင်းကောင်းသိပါတယ် အောင်နေမျိုး ငါတို့အဖွဲ့ဟာ စကားအပိုပြောလေ့မရှိဘူး။ လက်တွေ့သမားတွေ၊နောက်တစ်ချက်က ငါက ပဲခူးမှာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပေမဲ့ ငါ့ထက် အဆင့်မြင့်တဲ့သူရှိသေးတယ်။ ငါတို့အဖွဲ့ရဲ့မူအရတော့ အဖွဲ့ထဲဝင်လာတဲ့လူဟာ အသက်ရှင်ပြီး ပြန်မထွက်သွားစေရဘူးပဲ”
လူကိုချုပ်ကိုင်ထားစေပြီး အင်္ကျီချွတ်ခါ ကျောပြင်ရင်ဘတ်နေရာများကို စီးကရက်မီးနှင့်ထိုး မည်။ဒုတိယ ခြေထောက်ညို့သကြီးပေါ်တွင် ဒလိမ့်တုံးလှိမ့်မည်။ ယခင်လူတွေတုန်းကတော့ ထိုနှစ်နည်းနှင့်ပင် ကြောက်ပါပြီဗျ..အဖွဲ့ကမထွက်တော့ပါဘူးဗျ။အဖွဲ့အပေါ် ဘယ်တော့မှ သစ်စာမဖောက်တော့ပါဘူးခင်ဗျ...ဟုဝန်ချတောင်းပန်သည်နှင့် ပြန်လွှတ်ပေးသည်။
“ဆေးဖြတ်တယ်ဆိုတာ အဓိကလိုအပ်ချက်က ဆေးဖြတ်ချင်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ တကယ့်ဆန်ဒက အရင်းခံပါတယ်ဖေဖေ၊တကယ်ပြတ်ချင်လို့ ဘာဖြစ်ဖြစ်တောင့်ခံမယ်ဆိုရင် ရက်တိုတိုနဲ့ ပြတ်သွားမှာပဲ။ သူ့ကိုကုသပေးရတဲ့ဆရာဝန် လုပ်ပေးရတာက ဆေးကိုဖြတ်ပြီး သူမှီဝဲနေက အချိန်မှာ မမှီဝဲရလို့ သူ့ခန်ဓာရဲ့ သွေးကြောတွေ ဆေးတောင်းခံလာချိန်မှ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် လိုအပ်တဲ့ ဆေးထိုးပေးရမယ်။သောက်ဆေးပေးရမယ်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ သူ့စိတ်တွေ အာရုံ ပြောင်းသွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမယ်။ဥပမာ - ကျားထိုးတာဝါသနာပါရင်ကျားထိုး ပလေ့စေဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဖေဖေ..သူ့အာရုံက ဆေးမှီဝဲတာတို့မေ့ပျောက်သွားစေဖို့ပဲ”
“ဆေးဖြတ်တယ်ဆိုတာ..နှစ်နည်းရှိတယ်။ပထမနည်းက အစိမ်းဖြတ်နည်း၊ဒုတိယနည်းကတော့ အနုနည်းဆိုပါတော့။ ပထမအစိမ်းဖြတ်နည်းကတော့ ကြမ်းတယ်..ဒါပေမဲ့ ဆေးအပြတ်မြန် တယ်။ဒုတိယနည်းကတော့...နုတယ် အဖြတ်ခံရသူအတွက်သက်သာတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကာ လကြာမယ်။”
“အခန်းထဲထည့်ထားပြီး တံခါးကိုပိတ် သော့ခတ်ထားမယ်၊ ဆေးသုံးခွင့်လုံးဝမပေးဘူး။ ယတိပြတ် ဖြတ်တာပဲ။ အချိန်ကျရင် အောင်အောင်ရဲ့ ခန်ဓာသွေးကြောတွေက ဆေးတောင်း ခံလာမယ်။ အဲဒီမှာ အောင်အောင်မခံမရပ်နိုင်အောင်ခံစားရမယ်၊ အဲဒီမခံမရပ်ခံစားရတာကို မမနွေးက ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဆေးထိုးပေးမယ်။သောက်ဆေးသောက်စေမယ်။အဲဒါ အစိမ်းဖြတ်နည်းပဲ။အပြတ်မြန်တယ်။”
“နေ့စဉ်...စီးကရက်အလိပ် သုံးဆယ်သောက်နေရာက တစ်နေ့ကို ငါးလိပ်စီလျှော့သွားမယ်၊ အဲဒီမှာ စားဆေး ထိုးဆေးကတော့ မမနွေးသင့်တော်သလိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်။နောက်ဆုံး လုံးဝဆေးလိပ်မသောက်တဲ့အထိပေါ့။ အဲဒါက ရက်သိပ်ကြာတယ်၊လူတော့ သပ်သာတာ ပေါ့လေ။”
ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်လေးထဲက ရေးထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့် ဆေးသမား သဘာဝလေးတစ်ချို့သိစေချင်လို့ဆိုပါတော့လေ။
Posted by Alex Aung at 4:41 PM No comments:
ကျွန်တော် ဒီလထုတ် ဖူးငုံမဂဇင်းမှာပါတဲ့ ဥကာကိုကို(သံတွဲ)ရဲ့ ပင်လယ်တစ်စင်းရဲ့ ငိုချင်း ၀တ်ထုတိုလေးမှာပါတဲ့ နိဂုံးအဆုံးပိုင်းလေးကိုသဘောကျလို့ ကူးထည့်ပေးလိုက် ပါတယ်။
လောကကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့သောအဖေ။လောကကို ထာဝရစွန့်ခွာသွားတော့ အဖေ မလိုလားတဲ့သူတချို့လည်း ငိုကြတယ်အဖေ။ ဟန်ဆောင်မျက်ရည်တွေဆိုတာ ကျွန်တော် သိပ်သိတာပေါ့။အခုလေ လောကမှာ ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးက ဘာလဲသိလားအဖေ။ အရက်လေ.... အဲဒီအရက်ပေါ့။အဲဒီအရက်ကြောင့် အဖေ့အသက်၃၅နှစ်မှာ လူ့ဘ၀ထဲက စောစီးစွာ ဝေးလွင့်ခဲ့ရတာ။အဖေ့ရဲ့ ပြုံးယောင်သမ်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုမြင်ယောင်ရင်း အဖေ့လို ပညာတတ်ပြီး အရက်ကြောင့်နစ်မွန်းရတဲ့ ဘ၀မျိုး မရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ ကျွန်တော် ကတိပေးပါတယ်အဖေ။
အဖေက ဗဟုသုတစာပေတွေ ဖတ်ခိုင်းရင် ပျင်းရိနေတတ်တဲ့ အဖေ့သားလေ။အခုတော့ ကဗျာတွေ၊စာတွေရေးတတ်နေပြီအဖေရဲ့။ အားလပ်ရင် ခဲတံလေးနဲ့ ပုံဆွဲပြတတ်တဲ့အဖေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မျက်ရည်စတွေနဲ့ ဆေးရောင်ခြယ်လှည့်ပါဦး အဖေ။ ကြယ်တွေကြွေကျကုန်ပြီ အဖေရယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမှာလဲ။ ကျွန်တော်အမြဲပဲ ဆုတောင်းနေပါတယ် အဖေ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ဘယ်သူမှ မတိုးကြပါစေနဲ့လို့ပေါ့။
ရာသီဥတုသာယာတဲ့ နေ့တွေရောက်လာပြီအဖေ။ကျွန်တော်တို့ ငါးမျှားသွားကြရအောင်လေ။
အဖေမျှော်မှန်းထားတဲ့ ငါးကြီးကြီးတစ်ကောင်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာကို မျှော်လင့်နေသူက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျောက်ဆောင်ကလေး။ အဖေရယ်၊ကျောက်ဆောင်ရယ်၊ ရေလှိုင်းတွေရယ်..။ အဖေ့သား....ငါးမျှားသွားနေပါတယ်။
ဥကာကိုကို(သံတွဲ)(၂၂.၉.၂၀၀၂က ကွယ်လွန်ခဲ့သော အဖေ့အတွက်)
Posted by Alex Aung at 10:50 AM 1 comment:
(၅) စိတ်အားငယ်သူတွေသာ ဆေးစွဲတာပါ။
ဆေးစွဲခြင်းကသာ စိတ်အားငယ်ခြင်း၊စိတ်ပျော့ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေတာပါ။ ဘယ်သူကမှ ငါဆေး သမားဖြစ်ရမယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဆေးသုံးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
(၆) မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုဟာ မူးယစ်ဆေးသမားတစ်ယောက်ကိုပဲ ထိခိုက်နစ်နာစေတာပါ။
ဆေးစွဲသူ ဆေးသမားနဲ့ မိသားစုဝင်အားလုံးဟာ အရမ်းထိခိုက်ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ့်မိသားစု ၀င် တစ်ယောက်ဟာ မျက်စိအောက်မှာတင် မျက်ဝါးထင်ထင် ပျက်စီးသွား၊ခံစားသွားရတာကို မြင်လိုက်ရလို့ ဘယ်သူမှ မပျော်နိုင်ပါဘူး။ အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်အတွက် ဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဆေးစွဲခဲ့ရင် အလုပ်ထိခိုက်၊ပျောက်ရှ၊ပျက်စီး၊ဆုံးရှုံး၊ထိခိုက်နစ်နာမှု တွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရတာတွေဟာ မလိုအပ်တဲ့ ကုန်ကျမှုတွေပါ။ တရားဥပဒေအရ ဖြေရှင်းပေးရတာတွေ၊ဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေ ဒါတွေဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ နစ်နာမှုတွေပါပဲ။
(၇) မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုဟာ လူတွေအပေါ် ဘာမှ မသက်ရောက်နိုင်ပါဘူး။
မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေဟာ ခြိမ်းခြောက်မှု၊လာဘ်ထိုးမှု အမျိုးမျိုးကို ကျူးလွန်တတ်ပြီး နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်မှု၊ လူသတ်မှုကနေ လူမှုအသိုက်အ၀န်း တစ်ခုလုံးကိုပါထိခိုက်နစ်နာစေပါတယ်။
(၈) ကိုယ့်သားသမီး ဆေးချတာ မိဘတိုင်း သိနိုင်ပါတယ်။ရိပ်မိနိုင်ပါတယ်။
ဈေးပေါပေါနဲ့ ရတဲ့မူးယစ်ဆေးအချို့ဟာ ဒီနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လူငယ် တွေအနေနဲ့ ဒါတွေကို ၀ယ်သုံးဖို့ငွေသိပ်များများစားစား မလိုပါဘူး။ မိဘတွေဆီက အတင်း တောင်းစရာ၊ခိုးစရာ၊ ၀ှက်စရာ မလိုဘူး။ပြီးတော့ အန်တရယ်ဖြစ်လောက်တဲ့ လက်ခဏာတွေနဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက အချိန်အကြာကြီး သုံးတော့မှ မြင်သာတတ်တာမို့ ခဏပန်း၊တစ်ခါ တစ်လေ သုံးကြတဲ့ လူငယ်တွေမှာ သိပ်မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေ ဆေးချတာကို အလွယ်တကူ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးချပြီး ပြတ်သနာတွေ တက်လာတော့မှသာ အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို သိရတာပါ။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေ၊မိဘတွေ၊ သားသမီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပ်သိတယ်ဆိုပြီး အထင်မကြီးလေနဲ့။ဒါတွေကတော့ သူတို့ဆီက မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ “အထင်”လေးတစ်ချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း ဒီထက်မနည်းတဲ့ “အထင်”တလွဲလေးတွေအများကြီးရှိမှာပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းသူ ထုတ်သူ သုံးစွဲသူဘယ်သူတွေဟာ ထိခိုက်နစ်နာမှုအများဆုံးလည်း။ သုံးစွဲသူ နဲ့မိသားစုပါ။ ဒီအထဲမှာလူငယ်တွေ အများဆုံး....အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးစေ့တွေ၊ အိပ်မက်တွေ၊အလင်းရောင်တွေ၊မျှော်လင့်ချက်တွေကို တင်စားထားတဲ့ လူငယ်တွေ ဘယ်လောက်နစ်မျောလွင့်ပါ နေပြီလဲဆိုတာ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားကြရဖို့။
Posted by Alex Aung at 3:49 PM No comments:
တစ်ခါတစ်လေ လူတွေရဲ့ အထင်နဲ့အမြင်ဟာ တော်တော်လွဲချော်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် လည်း လူ့သဘာဝ ကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးရာ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀န်းက ပြောကြတာတွေကို (အကျိုးအကြောင်း ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိ မသိဘဲ၊မစဉ်းစားမိဘဲ) “အဟုတ်” ထင်လိုက်တတ် ပါတယ်။ အဲဒီလို တလွဲအယုံတွေ၊အထင်တွေကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ ပြတ်သနာတွေ ကြီးထွား ကုန်တတ်ပါတယ်။သူတို့ဆီက မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ထင်”စားလိုက်ကြပုံ တွေက ဆင်ခြင်မှတ်သား သင်ခန်းစာယူစရာပါ။
(1) မူးယစ်ဆေးဝါး ချတယ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်မှ
မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ LSDဆေးပြားတစ်ပြားရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန် ၅ဒေါ်လာ လောက်ပဲကျတာမို့ သူတို့လူငယ်အတော်များများဝယ်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးနဲ့ ကိုကာကိုလာ အအေးတစ်ပုလင်းစာ ဒါမှမဟုတ် ပေါက်ပေါက်ဆုပ် တစ်ဘူးနဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခွေ ငှားရမ်းခသာသာ လောက်ပဲရှိပါတယ်။
(၂) တစ်ခါတစ်လေ ဆေးခြောက်ချလို့ မစွဲပါဘူး။
ကိုကိန်းတို့၊ဟီးရိုးအင်းတို့ထက်စာရင်တော့ ဆေးခြောက်က စိတ်ချရတာပေါ့။ လေ့လာသူတွေ အဆိုအရကတော့ ဆေးခြောက်ကို စတင်စမ်းသုံးကြည့်ရာကနေ တခြားမူးယစ်ဆေးတွေ “ငြိ” သွားရတာပါလို့ တကယ်လို့ ဆေးစွဲသူတွေက ပြောပါတယ်တဲ့။
(၃) စိတ်အပန်းဖြေတဲ့ သဘောနဲ့ ဆေးသုံးတာသိပ်အန်တရယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။
မူးယစ်ဆေးအားလုံးဟာ အန်တရယ်ရှိပါတယ်။သုံးသူအားလုံးကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရော ရုပ်ပိုင်းပါ အပြောင်းအလဲဖြစ်စေပါတယ်။ ကြာကြာသုံးလာတာနဲ့အမျှ အန်တရယ်ဖြစ်စေတဲ့ လက်ခဏာ တွေ ပိုပိုဆိုးလာပြီး ဆေးစွဲခြင်း ဆိုတဲ့အဆင့်ကို ရောက်စေပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်မူးယစ်ဆေးဝါးမှ စိတ်မချရပါဘူး။ဒါကြောင့် ဘယ်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုမှ မစမ်းမိ၊မသုံးမိဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။
(၄) လူတစ်ယောက် ဆေးသုံးချင်ရင် အစိုးရအနေနဲ့ ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနဲ့ သာယူမှုတို့အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ မယ့် အရာမှန်သမျှကို ဘယ်အစိုးရကမှ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by Alex Aung at 3:40 PM No comments:
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ နာကျင်မှုကိုခံစားရလွန်းလို့ ယောက်ျားတန်မဲ့ မျက်ရည်တွေက မရပ်မနားကိုကျချင်နေ တော့တာ။ အရာရာက ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။အပြင်ပန်းအနေနဲ့တော့ ကျွန်တော် ကြိုးစား ပြီးနေပေမယ့် အတွင်းဘက်မှာ တော့အထီးကျန်မှု၊နာကြည်းမှုအပြည့်နဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော်က တော့ အပြုံးနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားပေမယ့် ရူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေတာ အမှန်ပါ။
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ အမြဲတမ်း ခံစားရတာကို အမှန်တိုင်းပြောတတ်သူပါ။ ခုတော့လိမ်ပြောနေခဲ့ပါပြီ။ “ချစ်ပါတယ်”လို့ပြောခဲ့တဲ့ ကိတ်စမှာတော့ လိမ်ညာမှုတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်လေ လူတွေစကားကိုလွယ်လွယ်ပြောသံကြားရရင် ဒေါသဖြစ်တတ်သူပေါ့။ သူတို့တစ်တွေ “ချစ်တယ်”လို့လွယ်လွယ်ပြန်ပြောတတ်ကြာတာလေ။ ခုလည်း အဓိတ်ပါယ် သိပ်မရှိလှတဲ့ “ချစ်တယ်”ဆိုတာကို တကယ်မချစ်ဘဲ အထီးကျန်ဆန်တဲ့ဘ၀ ကလွတ်မြောက် အောင် ကျွန်တော် သူမကိုပြောခဲ့တာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အမှန်တိုင်းပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီး အတင်းကို ယုံခိုင်းနေမိခဲ့ပါရဲ့။
တစ်ချိန်လုံး ကျွန်တော် အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် တကယ်ချစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို အားလုံးဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော် တကယ်ချစ်ခဲ့သူကို ပြောမပြ၀ံ့ခဲ့တာ....။
Posted by Alex Aung at 11:20 AM 1 comment: